Myanmar 18 Plus: လွှမ်းလို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ - အပိုင်း (၁)
လွှမ်းလို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ - အပိုင်း (၁)
(၁)ဟိုမှာလာနေပြီကွ..ဇော်ဇော်အောင်.သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကလက်တို့ပြီး အသိပေးလိုက်တော့ ဆိုင်ထဲမှ ဖွင့်ထားသည့် သီချင်းအာရုံတွင် စီးမျှောနေသော ကျွန်တော်သတိဝင်လာသည်...။ဒီရပ်ကွက်ထဲသို့ တစ်လလောက်ကပြောင်းလာသော ဝေေ၀အောင်ဆိုတာတော်တော်လှသည်ဟု သူငယ်ချင်းများပြောသည်ကို မကြာခဏကြားသော်လည်းမနက်တိုင်အလုပ်သွား.ညနေစောင်းမှပြန်သော ကျွန်တော့်အဖို့ဝေေ၀အောင်ကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့..။ဒီနေ့ကျမှ ကျွန်တော်နေမကောင်းချင်သလိုလိုရှိတာနဲ့ အလုပ်မှခွင့်ယူပြီး အိမ်မှာနားနေစဉ် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ တိုးအေးရောက်လာပြီး စိတ်ထဲကြည်လင်အောင် လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ကြအောင်ဆိုတာနဲ့ လမ်းထိပ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်..ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသောခဏအတွင်းဝေေ၀အောင်အလှမှာစီးမျှောသွားမိသည်။အသက်က(၂၀)ခန့်ပင်ရှိဦးမည်...မစွင့်မကားတင်ပါးနှင့်ဖြူဝင်းသောအသားအရေ. ဖွံ့ထွားသောရင်သားနှင့် မျက်နှာကလည်းချစ်စရာလေး။။နှာတံလေးကဖြောင့်စင်းနေပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကလည်းဖူးဖူးလေး..မျက်လုံးလေးကလည်းဝိုင်းဝိုင်း..ဒါ့ကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေက ဝေေ၀..ဝေေ၀နဲ့ပါးစပ်ဖျားကကိုမချတာလို့တွေးမိသည်..။သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ မြို့ထဲကပြန်လာဟန်တူသည်...ဘာတွေပြောပြီး သဘောကျလာသည်မသိ..တခစ်ခစ်နှင့်ရယ်နေကြသည်..ထိုသို့ရယ်မောနေရင်း ဝေေ၀အောင်က ဆိုင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သော အခါတွင် သူမကိုငေးကြည့်နေသော ကျွန်တော့်ရဲ့ အာသာငမ်းငမ်းမျက်လုံးတွေကို လှမ်းမြင်သွားဟန်တူတယ်..သဘောမကျသလိုလိုမျက်မှောင်လေးကုတ်သွားတယ်...အိုဝေေ၀ရယ်..ဒီလိုအနေအထားလေးတောင်လှလှချည်လားကွယ်..မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးထင်တယ်....။ဟေ့ကောင်..ငမ်းလှချည်လားကွ..မျက်လုံးလဲကျွတ်ထွက်သွားပါဦးမယ်..။ဟာကွာ..သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ပုခုံးကို လက်နဲ့ပုတ်ပြီးသတိပေးလိုက်တာကြောင့် လန့်သွားပြီးကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်တောင် နည်းနည်းရှက်မိသွားပါတယ်..
(၂)ခင်လေးနေပါဦးဟဲ့နင်ကလည်းမြန်လိုက်တာ...ဝေေ၀အောင်က ခြေလှမ်းများကို ခပ်မြန်မြန်လျှောက်နေသော ခင်လေးနောက်ကို အပြေးလေးလိုက်ရင်း....။အမယ်..ငါလျှောက်တာသိပ်မမြန်ပါဘူးဟဲ့...ပုံမှန်ပါပဲ..။နင်သာ ဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲက ဇော်ဇော်အောင်ကြည့်တာကို သဘောကျပြီးနှေးနှေးလေးလျှောက်နေပြီးတော့.။သြော်...အဲ့ဘဲနာမည်ကဇော်ဇော်အောင်တဲ့လား....။ သူ့ကို ငါမတွေ့ဖူးသလိုပဲနော်..ခင်လေး.။သူကဒီရပ်ကွက်ထဲကမဟုတ်ဖူးထင်တယ်.။ဒီရပ်ကွက်ထဲကပါပဲ..ဝေေ၀အောင်ရဲ့။နင်သူ့ကိုမမြင်ဖူးလို့ပါ။ ငါတို့ထက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်..သူက။ကျောင်းတုန်းကစာအရမ်းတော်တယ်။အားကစားလည်းအရမ်းထူးချွန်တာ။နောက်တော့သူ ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာသူ့အဖေနဲ့အမေကကားမှောက်ပြီးဆုံးသွားတာ...။သူပြန်လာပေမဲ့ သူ့အဖေအမေအလောင်းကိုတောင်သူမမှီလိုက်ဖူး။
ဝေေ၀အောင်ရင်ထဲသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားမိတယ်..။ခက်တာက သူUni နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကိုဇော်အောင် အဖေအမေဆုံးသွားပြီးကျောင်းမှာလည်း စိတ်နာစရာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ထင်တယ်..။သူကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးဟ.။ မြို့ထဲကသူ့မိဘတွေလက်ထက်ကထောင်ထားတဲ့ပွဲရုံမှာပဲ တစ်နေကုန်တစ်နေခန်းနေပြီး အလုပ်တွေပဲဇောက်ချလုပ်နေတော့တာပဲ..။။ခင်လေးပြောစကားကြောင့် ဝေေ၀အောင်ထူးဆန်းသွားသည်..။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲ ခင်လေးရဲ့..။ငါလဲသေချာတော့မသိဘူးဟ..။ငါ့အကိုဝမ်းကွဲ ကိုဇော်အောင်သူငယ်ချင်းကပြောလို့သိတာ။သူ့ကောင်မလေးကနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ပြောတာပဲဟာ...။သူ့ကောင်မလေးနာမည်က သီရိတဲ့....။အဖြစ်ကဒီလိုဟ..
ကိုဇော်ဇော်အောင်နဲ့ အဲ့သီရိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကျောင်းတုန်းက အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြတာပေါ့..ဒါပေမဲ့ကိုဇော်ဇော်အောင် သူ့မိဘတွေကားမှောက်ပြီး ဆုံးလို့မြို့ပြန်လာတယ်လေ..ကိုဇော်ဇော်အောင် ကျောင်းကိုပြန်သွားတော့ သီရိဆိုတဲ့သူ့ကောင်မလေးကကျောင်းမှာ မရှိတော့ဘူးဟ..သူ့အိမ်ကပေးစားတဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကိုယူလိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲ..။ကိုဇော်ဇော်အောင်လည်း အရမ်းစိတ်နာပြီး..ကျောင်းကိုဆက်မတက်ဖြစ်တော့တာတဲ့...။သြော်..ဝေေ၀အောင်စိတ်ထဲတစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားသည်...။ဒါနဲ့ကိုဇော်ဇော်အောင်က နောက်ရည်းစားတွေဘာတွေမထားဘူးလား..။ထားတာတော့မတွေ့ဘူးဟ...သူအဲ့နောက်ပိုင်းကောင်မလေးတွေနဲ့သိပ်မပတ်သက်ဘူး..ဒီနေ့ နင့်ကိုတွေ့တော့မှ အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေလို့ထူးဆန်းနေတာ...။ခ်ခ်.။အို.မိန်းမနော်..ဘာတွေနောက်နေမှန်းမသိဘူး..။ဝေေ၀အောင်ရင်ထဲတစ်မျိုးလေးပင်ဖြစ်သွားသည်။ ရင်ခုန်တာလိုလို ရှက်တာလိုလို။ဒါပေမဲ့ ခင်လေးစနောက်တာကို သူမစိတ်ထဲ ကျေနပ်မိသလိုလိုခံစားရတာတော့အမှန်။အင်းလေ..နင်ကလည်းချောတာကိုးဟ..ကိုဇော်ဇော်အောင်ကြီးဈာန်လျှောရင်လည်းလျှောသွားမှာပေါ့..ဟီးနင်နဲ့ကိုဇော်ဇော်အောင်ကြီးက တွဲမိရင်တော်တော်လိုက်မှာဟ..နင်ကလည်းချောချော..ကိုဇော်ဇော်အောင်ကလည်း ချောချောဆိုတော့...အို..ခင်လေး..နင်မနောက်နဲ့တော့ကွာ..ငါမနေတတ်ဘူးရှက်လာပြီ။။။ဝေေ၀အောင်တကယ်ရှက်နေမှန်း ခင်လေးသတိထားမိသည်..မျက်နှာလေးကိုရဲလို့..။သို့သော်စိတ်ဆိုးဟန်မတူ...ကျေနပ်နေဟန်ကပေါ်နေသည်..။ကျောင်းတုန်းကတည်းက ဘယ်ကောင်လေးနှင့်စစ မရှက်တတ်သောသူမသူငယ်ချင်း.ရှက်တာလေးကိုခုမှ ခင်လေးမြင်ဖူးတော့သည်။ကဲပါ..ယောင်းမရယ်...ကိုယ်ကစတာပါ..ခ်ခ်.သွားရအောင်...အိမ်ပြန်နောက်ကျနေပြီ..။
(၃)ဇော်ဇော်အောင်သေသေချာချာစဉ်းစားနေသည်...ဝေေ၀အောင်ဟာ ဘယ်သူနဲ့တူမှန်းမသိ..သူအရမ်းရင်းနှီးသော သူတစ်ယောက်နှင့်တူနေသည်..။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထပြန်ခဲ့ပြီးအိမ်ရောက်သည်အထိစဉ်းစားမရ..အိမ်ထဲသို့ရောက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲရောက်မှ သူ့ပွဲရုံမှ စာရင်းဇယားတွေကို ယူစစ်ဦးမည်ဟုစဉ်းစားမိပြီးစားပွဲပေါ်မှစာရင်းဇယားများတင်ထားသော စာတွေကိုဆွဲယူလိုက်စဉ်သူ့လက်ကစာအုပ်တွေကိုတိုက်မိသွားပြီးစားပွဲအောက်သို့ပြုတ်ကျကုန်သည်..။စာအုပ်တွေကို ပြန်ကောက်လိုက်စဉ် စာအုပ်ထဲမှ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတစ်ခုကပြုတ်ကျလာသည်.။ဓါတ်ပုံအဟောင်းတစ်ပုံ..နောက်မှာ အချစ်ဆုံးမောင့်အတွက် အမှတ်တရ..သီရိတဲ့လေ....သောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့မိန်းမ..သူမဓါတ်ပုံကိုသူအခုအချိန်ထိသိမ်းထားမိနေသေးသည်။သူမတောင် သူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီပဲ..။အခုအချိန်ထိ ဘာလို့သိမ်းထားမိနေပါလိမ့်..တကယ်တမ်းဆို သူစိတ်နာနေရမှာလေ...။သူမလည်းယောင်္ကျားရသွားလို့အခုအချိန်ဆိုကလေးတွေဘာတွေရနေရောပေါ့လေ..။ဝေေ၀အောင်ဘယ်သူနဲ့တူသည်ကိုခုမှသူသိသွားသည်..။သီရိနဲ့တူနေတာကိုး...။ဒါပေမဲ့သီရိမျက်နှာက အမြဲတမ်းတစ်ခုခုကို လျှို့ဝှက်ထားသလိုမျိုးနှင့် စိတ်ထဲဘာဖြစ်နေသည်ကိုခန့်မှန်းမရ..။ဝေေ၀အောင်မျက်နှာကတော့ မနက်ကသူမြင်လိုက်တာ..အင်မတန်ရိုးရှင်းလှသည်။ရိုးသားသောမျက်နှာမျိုး..ဟန်မဆောင်တတ်သည့်မျက်နှာမျိုး..အေးချမ်းသည်ဟုထင်မိသည်..။
(၄)ဝေေ၀အောင် စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသည်..သူမစိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသည်။ခင်လေးပြောပြသော
မနက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှနေပြီး သူမကိုစိုက်ကြည့်ခဲ့သော ကိုဇော်ဇော်အောင်ဆိုတာသူမနှင့်သိပ်ပြီးရင်းနှီးနေသလိုခံစားနေရသည်..။ပြီးတော့သူမ၀မ်းကွဲအမနာမည်ကသီရိလေ..။သီရိနှင့်ဝေေ၀အောင်က၀မ်းကွဲညီအမဆိုပေမဲ့ရုပ်ချင်းသိပ်ဆင်သည်..။ဒီမြို့လေးကို ဝေေ၀အောင်က အလုပ်ဖြင့်တာဝန်ကျလာသဖြင့် မသီရိနှင့်ဝေေ၀အောင်အဆက်ပြတ်သွားခဲ့သည်။မမသီရိယောင်္ကျားရသွားတာကလည်း ခင်လေးပြောပြတဲ့ အချိန်တွေလောက်ကပင်..။သူမငှားထားသောအိမ်လေးကအခန်းထဲမှာ ဝေေ၀အောင်စဉ်းစားခန်းဝင်နေသည်။ဝေေ၀အောင်ကား စိတ်ထဲတွင်အရမ်းသိချင်လာသဖြင့် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုကောက်နှိပ်လိုက်သည်..မမဟေမာဆီ..မမသီရိရဲ့ကျောင်းတုန်းကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း..။ဖုန်းကခေါ်တာနဲ့တန်းဝင်သွားသည်...။ဟဲလို..ဝေေ၀လား...မဆက်စဖူး..ညီမလေးမမဟေမာအသံကိုကြားရပြီ..မမဟေမာလား...ညီမလေးမမကိုမေးစရာရှိလိုိ့ပါ..ပြောလေ..ညီမလေးဝေေ၀..တာဝန်ကျတဲ့မြို့မှာအဆင်ပြေရဲ့လား..ပြေပါတယ်မမ..။ဟိုလေ..ညီမလေးတစ်ခုသိချင်လို့ပြောပြပါလား..။ဘာမေးမှာလဲ..ညီမလေး..ပြောလေ..ဟိုလေ..မမသီရိရဲ့ကျောင်းတုန်းကဘဲနာမည်ကဘယ်သူလဲမမ..သြော်ညီမလေးဇော်ဇော်အောင်တဲ့...။ ညီမလေးတာဝန်ကျနေတဲ့မြို့ကလေ..ဟင်..ဝေေ၀အောင် နှလုံးခုန်သံများ မြန်လာသည်ဟုထင်မိသည်..ရင်ထဲမှာတဒုတ်ဒုတ်နှင့်ပြန်ကြားရသည်။ဒါဆိုရင်..မနက်ကခင်လေးပြောပြတဲ့သူက..သေချာနေပြီပေါ့...
(၅)ဇော်ဇော်အောင် နောက်နေ့ပွဲရုံကို သို့ရောက်တဲ့အခါမှာ..မနေ့ကသူနားနေလို့မဖြတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကတန်းစီနေတာပါပဲ..မောင်ထွန်းရေ..ဟုတ်ကဲ့အကို..တပည့်ကျော်မောင်ထွန်းကသူ့နားကိုအမြန်ပဲရောက်လာပါတယ်..။မနေ့ကဘယ်သူတွေလာကြသေးလဲအကို့ပါတနာကြီးဦးခင်ထွန်း.အကိုနေမကောင်းလို့နားနေတယ်ပြောလို့ပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒါအကိုအားရင် သူ့အိမ်ဘက်လှည့်လာပါဦးတဲ့။အကိုနဲ့ပြောထားတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လေအဆင်ပြေသွားလို့တဲ့..အဲ့ဒါအကို့အတွက် အကျိုးဆောင်ခပေးမလို့တဲ့။ဦးခင်ထွန်းကား ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးပေါ့..။ဦးခင်ထွန်းကော သူ့ဇနီးဒေါ်သက်ထားပါသဘောကောင်းကြသည်..။ဇော်ဇော်အောင်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လုပ်ဦးခင်ထွန်းနှင့်တွဲလုပ်ပါကအဆင်ပြေသည်။တစ်လောက ဦးခင်ထွန်းရဲ့ပွဲရုံအတွက် လိုအပ်နေသော ကုန်များကိုသူပို့ပေးခဲ့သဖြင့် အဆင်ပြေသွားဟန်တူသည်။ညနေပိုင်းလောက်တော့ဦးခင်ထွန်းဆီသွားဦးမှ..။ဦးခင်ထွန်းကားမိန်းမရကံကောင်းသည်ဟုပြောရမည်..။ဦးခင်ထွန်းမိန်းမဒေါ်သက်ထားက (၃၅)နှစ်ခန့်ရှိပြီ..တော်တော်လည်းချောသလိုသဘောလည်းကောင်းသည်။သူ့ကိုလည်းမောင်လေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားသည်။ဒါကြောင့်ဦးခင်ထွန်းတို့အိမ်မကြာခဏရောက်ဖြစ်တယ်လေ..သူလည်း မသောက်ဖြစ်တာကြာပြီ..ဦးခင်ထွန်းကခေါ်တာ သောက်ဝိုင်းဖွဲ့မလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်မည်..။ဦးခင်ထွန်းက သူ့အိမ်မှာ ဇော်ဇော်အောင်ကို ခေါ်ပြီး သောက်ဝိုင်းစားဝိုင်းဖွဲ့နေကျဆိုတော့လေ..။
(၆)ဇော်ဇော်အောင်ကား သူ့ကားကိုဦးခင်ထွန်းတိုက်ရှေ့တွင် ရပ်လိုက်သည်။ခြံတံခါးကို အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကလာဖွင့်ပေးသည်...။ဇော်ဇော်အောင်က ကားကိုခြံထဲသို့မောင်းဝင်လိုက်သည်..။ဒေါ်သက်ထားကား ခြံထဲသို့ဇော်ဇော်အောင်ကားဝင်လာတာကို အိမ်အပေါ်ထပ်မှလှမ်း မြင်လိုက်သည်။ဒါကြောင့် သူမအောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။သြော်..မောင်လေးဇော်ဇော်ပါလား...နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြားတယ်...ခုကောကောင်းသွားပါပြီအမ...အကိုကြီးရော..မနေ့ကသူပွဲရုံလာသွားတယ်ကြားလို့..။ဟုတ်တယ်မောင်လေးရဲ့..မင်းကိုကြီးက ရန်ကုန်ခဏတက်သွားတယ်..တစ်ပတ်လောက်ကြာမယ်..။မင်းလာရင် ပိုက်ဆံပေးလိုက်ပါဆိုလို့အမသိမ်းထားတယ်..။မနေ့ကမင်းဆီသွားခါနီးဝင်သွားတာဖြစ်မယ်...အမသွားယူပေးရမလား။နေဦးထမင်းစားပြန်ရမယ်နော်..မောင်လေး..ဟုတ်ပါပြီ..အမရယ်..။ဒေါ်သက်ထားကား ထမင်းစားရန်မိအေးကိုပြင်ခိုင်းလိုက်သည်..။ခဏနော်မောင်လေးဟုဆိုပြီးအပေါ်ထပ်သို့တက်သွားသည်..။မိအေးရေထမင်းပြင်ပြီး အိမ်ပေါ်ခဏတက်လာဦး..။ဟုတ်ကဲ့..မမလေး..။မိအေးကား ကိုဇော်ဇော်အောင်အတွက် ထမင်းပြင်ပြီးသည့်နောက်အိမ်အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားသည်။ဒေါ်သက်ထားကားမှန်တင်ခုံရှေ့တွင်အလှပြင်နေတာကိုတွေ့ရသည်..။မိအေးရေ..ရှင်..နင်နင့်အမေအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့လေ..နင့်လစာစားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်..။နင့်အမေလဲ အမဆီဖုန်းဆက်တယ်...နေသိပ်မကောင်းဘူးတဲ့..။အဲ့ဒါဒီညနေပြန်လိုက်ဦး..မနက်ကျမှပြန်လာခဲ့။မမတစ်ယောက်ထဲနေတတ်ပါ့မလား..နင်ကလည်းရပါတယ်တစ်ရက်တစ်လေတော့...သွားတာသွား..နင့်အမေကအရေးကြီးတယ်..သြော်..နင့်အတွက်မုန့်ဖိုးယူသွားဦးဒါကသပ်သပ်ပေးတာ ဆိုပြီး ငွေ(၃၀၀၀၀ိ/-)ထုတ်ပေးလိုက်သဖြင့် မိအေးကားတော်တော်ပျော်ရွှင်သွားသည်..။အမေဆီကလည်းမရောက်တာကြာပြီလေ..ဟို..ကိုဇော်ဇော်အောင်ထမင်းစားနေတာ သိမ်းပြီးမှသွားလိုက်မယ်နော်..ရတယ် မိအေး..အမပဲသိမ်းပေးလိုက်မယ်.ဟုတ်ပြီလား.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ..မိအေးကားပျော်ရွှင်စွာဖြင့် သူမအ၀တ်အစား(၂)စုံ(၃)စုံကို အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး သူမအမေအိမ်သို့ပြန်သွားတော့သည်။
ထမိန်ကို ခပ်ပါးပါးဝတ်ထားသဖြင့် သူမရဲ့ ရင်သားနှင့်တင်သားများကားအထင်းသား ထွက်ပေါ်နေသည်..။သူမအနေနှင့် စားရကံကြုံသဖြင့် ကွက်တိပင်.။သူမယောင်္ကျား ဦးခင်ထွန်းကလည်းခရီးထွက်နေချိန်မှ ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းကွက်တိရောက်လာသည်..။ဦးခင်ထွန်းကို ငွေမက်သောကြောင့်သာ သူမလက်ထပ်ခဲ့သော်လည်း မချစ်ပေ။ဒါပေမဲ့ ပျော်အောင်နေခဲ့သည်။ဦးခင်ထွန်းက သူ့မိတ်ဆွေဇော်ဇော်အောင်ကို ခေါ်လာကတည်းကဘာကြောင့်မှန်းမသိ..သူမစိတ်ဝင်စားနေသည်။ဇော်ဇော်အောင်လို အားကောင်းမောင်းသန် လူပျိုလေးနှင့်ဆိုသူမလိုအပ်နေသော ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်မှာသေချာနေသည်။ဒါပေမဲ့
ဦးခင်ထွန်းရှေ့မှာတော့ဇော်ဇော်အောင်ကို ကိုယ့်မောင်လေးသဖွယ်သဘောထားပြခဲ့သဖြင့် ဇော်ဇော်အောင်ရော ဦးခင်ထွန်းပါယုံနေကြတာတော့မဆန်း။ယခုတော့ မိအေးကိုလည်းအနုနည်းဖြင့် ပထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့.။ဇော်ဇော်အောင်ကို မြူဖို့အပိုင်းသာကျန်တော့သည်။သူမတို့လို သူဌေးမိန်းမတွေလောကမှာ လင်ငယ်နေတာကမဆန်းတော့...။တစ်ခါတစ်ရံ သူမတို့အချင်းချင်းဖဲဝိုင်းမှာ ကိုယ့်လင်ငယ်ဘယ်လို လုပ်တာကောင်းကြောင်းပင် ကြွားလိုက်ကြသေးသည်။ဇော်ဇော်အောင်လိုလူမျိုးကို လင်တော်ချင်နေသူများက ဒုနဲ့ဒေးဒီတော့ ကိုခင်ထွန်းရဲ့မိတ်ဆွေ မိန်းမတွေ မတော်ခင် သူမကဦးအောင်ကြံစည်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။သူမက အိမ်အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာသည်။ဇော်ဇော်အောင်ကား ထမင်းစားနေဆဲပင်...မောင်လေး..စားဦးနော်...အမအအေးသွားယူလိုက်ဦးမယ်ဟုပြောပြီးနောက်မီးဖိုဆောင်ထဲထွက်လာခဲ့သည်။ဒေါ်သက်ထားကား အအေးဖျော်ရင်း အပေါ်ထပ်မှသူမှယူလာသော ဆေးမှုန့်လေးများကို အအေးခွက်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထမင်းစားခန်းသို့ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
(၈)ဒေါ်သက်ထားဖျော်တိုက်သော ဖျော်ရည်ကို သောက်ပြီး ဧည့်ခန်းတွင်ဒေါ်သက်ထားနှင့် ဇော်ဇော်အောင်ခဏစကားပြောနေသည်..ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်မှန်းမသိ..ဒေါ်သက်ထားကားတော်တော်လှနေသည်..ထမိန်ကလည်းတော်တော်ပါးသည်ဟုထင်မိသည်...သူ့ဘေးနားမှာလာထိုင်သဖြင့်
သူမရဲ့ပေါင်တံများကို ထမိန်ခံထားသော်လည်း ပါးသဖြင့် အတိုင်းသားနီးပါးမြင်နေရသည်..အင်္ကျီကလည်းတော်တော်ပါးသဖြင့် သူမရဲ့ရင်ညွှန့်များကို ၀ိုးတ၀ါးမြင်နေရသည်..သူ့ရဲ့ဖွားဖက်တော်ညီလေးကလည်းဘာကြောင့်မှန်းမသိ..ခုနကတည်းကထနေသည်..။တင်းရင်းနေပြီး မိန်းမတစ်ယောက်ကို လိုးချင်သောစိတ်များဖြစ်နေသည်။မဖြစ်ဖူး...ဒေါ်သက်ထားနှင့်တူကလည်းနှစ်ယောက်ထဲ..မျက်နှာများပင်ရဲလာသည်..ဒေါ်သက်ထားကား ဇော်ဇော်အောင်ကိုသူမခတ်လိုက်သောဆေးစွမ်းပြနေပြီဆိုတာရိပ်မိသည်..တရုတ်ပြည်မှလာသောရာဂကြွဆေးများထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..ဇော်ဇော်အောင်ကားထလိုက်သည်..အမကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်..သက်ထားကား ဇော်ဇော်အောင်လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်..နေပါဦး..မောင်လေးရဲ့အမမေးစရာရှိလို့...မင်းမိန်းမမယူသေးဘူးလား..။ဟင့်အင်း..မယူချင်သေးပါဘူး။ဟုတ်လို့လားကွ..င့ါမောင်ကလည်း..မင်းကျောင်းတုန်းကရီးစားရှိခဲ့တယ်ဆို..သီရိဆိုလား...။မမေးပါနဲ့အမရာသူ့အကြောင်း..အဲ့ဒါမင်းညံ့လို့ပေါ့ကွ..လာအမပြောပြမယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုထိုင်ခုံတွင်ပြန်ထိုင်ခိုင်းသည်..သူမငြင်းမိတာဘာကြောင့်မှန်းမသိ..ဒေါ်သက်ထားသူ့ကိုအခုလိုပြန်ထိုင်ခိုင်းတာကိုသာယာသလိုလိုဖြစ်နေသည်..ဒေါ်သက်ထားက သူ့အနားပူးကပ်ပြိးထိုင်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်သက်ထားကိုယ်မှကိုယ်သင်းနံ့များက နှာခေါင်းထဲမှာရလာသည်။စိတ်ကပိုကြွသလိုလိုဖြစ်ပြီး ထိုသို့အသားစိုင်များဖြင့်ထိတွေ့ရတာကိုသာယာသလိုလိုဖြစ်လာသည်..။ဇော်က ပညာမှမစုံတာကိုး..နို့မို့ဆိုမင်းကောင်မလေးနဲ့မကွဲဘူး..ဘယ်လို..အမ..ဟင်းဟင်းမင်းကသိပ်ညံ့တာပဲ..သင်ပေးရမတတ်ဖြစ်နေပြီ..သက်ထားကား ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ပေါင်ကိုသူမလက်တစ်ဖက်နဲ့မသိမသာပွတ်လိုက်ပါတယ်..ကောင်လေးမနေတတ်ဖြစ်နေတာကိုတော့သူမသိနေပါတယ်.။ကဲ...ပညာဆိုတာဘာလဲပြမယ်..ဒေါ်သက်ထားက တီဗွီဆီလျှောက်သွားပြီး စက်ထဲကို ခွေတစ်ခွေထည့်လိုက်ပါတယ်..ဇော်ဇော်အောင်ကား ဒေါ်သက်ထားသူ့ရှေ့မှာ လျှောက်သွားစဉ် သူမရဲ့တင်သားကြီးများယမ်းခါသွားတာကို စိုက်ကြည့််နေတာကို ဒေါ်သက်ထားသိတာပေါ့လေ..ခွေကိုထည့်ပြိးသက်ထားပြန်လာပြီး ဇော်ဇော်အောင်နားထိုင်လိုက်ပါတယ်..ထည့်လိုက်တဲ့ခွေကတော့ သူမသူငယ်ချင်းလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ အပြာကားပါ...ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးအပြာကားလေ..ဒီကောင်လေးစိတ်မထိန်းနိုင်အောင်လုပ်နေတာပါ..။
ဇော်ဇော်အောင်စိတ်တွေထိန်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာဒေါ်သက်ထားသိပါတယ်...ကောင်လေူရဲ့လက်ကသူမခါးကိုဖက်လာပါတယ်...ဒေါ်သက်ထားက..အို..မင်းလေးသိပ်ဆိုးပါလားကွယ်။သူမရဲ့လက်တွေကလည်းအားကျမခံဇော်ဇော်အောင်ခါးကို အပြန်အလှန်ဖက်လိုက်ပါတယ်။ဖွင့်ပြထားတဲ့အပြာကားကလည်းဇာတ်ရှိန်မြှင့်နေပါပြီ..နီဂရိုးကောင်လေးရဲ့လီးက လူဖြူမတစ်ယောက်က စုပ်ပေးနေတဲ့အခန်းပါ.ဒေါ်သက်ထားအနေနဲ့ဒါမျိုးအကွက်တွေက ပိုင်နိုင်ပြီးသားပါ။။ဇော်ဇော်အောင်သူမကိုနမ်းလာတဲ့အချိန်မှာ သူမကဇော်ဇော်အောင်ပုဆိုးအောက်ကို လက်နှိုက်ပြီးဖြေလျှော့ပြီးသားပါ..ကောင်လေးရဲ့လက်ကလည်းသူမပေါင်ကြားကိုနှိုက်ပြီး သူမအဖုတ်ကို ပင်တီပေါ်မှပွတ်ပေးနေပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီး..ဒုတ်ကြီးကိုသူဘယ်လက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်လိုက်ပြီးဆွလိုက်ပါတယ်..ကောင်လေးဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကတော့(၆)လက်မလောက်ရှိတာမို့စံချိန်မှီလီးကြီးပါပဲ..တုတ်လိုက်တာကလည်း သူမလက်နဲ့အပြည့်ပါ..ကောင်လေးလီးကိုအနည်းငယ်ဆွပေးပြီး သူမခေါင်းကိုလျှောဆင်းလိုက်ပါတယ်...ဇော်ဇော်အောင်လီးကသူမမျက်နှာနဲ့အနည်းငယ်သာကွာပါတော့တယ်..ထိုလီးကြီးကို ဒေါ်သက်ထားက နှုတ်ခမ်းနှစ်မွာကြားကနေသူမပါးစပ်ထဲငုံလိုက်တဲ့အခါမှာ သူမအာခေါင်ထောက်မတတ်ပါပဲ.ကောင်လေးကပလွေမှုတ်တာမခံဖူးဘူးထင်တယ်...သူမကလျှာနဲ့ပတ်ပြီးလီးထိပ်ကိုကစားပေးပါတယ်။အင်းအင်းအားအားနဲ့ဇော်ဇော်အောင်တစ်ယောက်ကောင်းနေပါပြီ..ဒေါ်သက်ထားကလည်း
အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ နဂါးတစ်ကောင်လိုမာန်ထနေတဲ့ဇော်ဇော်အောင်လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲမှာရှေ့တိုးနှောက်ငင်ပြုလုပ်ပြီး လွေပေးပါတယ်...ဇော်ဇော်အောင်ဟာ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ မျက်လုံးကြိးမေးစင်းပြီးအရသာခံနေပါတယ်.ဒေါ်သက်ထားကတော့ ဇော်ဇော်အောင်လီးကြီးကဒစ်မပြုတ်သေးဘူးဆိုတာသိလိုက်တော့လူပျိုလေးမှန်းသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်..ဒီကောင်လေးကို သူမကိုလုပ်ရတာစွဲသွားအောင် ပညာပြနေတာပါ..
(၉)ဒေါ်သက်ထားရဲ့ ပုလွေမှုတ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဇော်ဇော်အောင်တစ်ယောက်မျက်လုံးကြီးမှေးစင်းပြီးတအင်းအင်းတအဲအဲ နဲ့ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ပါးစပ်ထဲကို လရေတွေပန်းထုတ်မိသွားပါတယ်..။ဇော်ဇော်အောင်အရမ်းကိုအားနာသွားမိပါတယ်.။ကန်တော့နော်...အမ..ဒေါ်သက်ထားက ..ဟင်းဟင်း..မင်းလေးကလည်း အားနာစရာမလိုပါဘူးကွ..ဒါတွေက မင်းကိုကြီးကိုလုပ်ပေးနေကျ..မင်းကိုကြီးက တစ်ညကို ဒါမျိုးတစ်ခါလောက်လုပ်ပေးလိုက်မှ အိပ်ပျော်တာ..။ကျွန်တော်တော့ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲမမရယ်...။အိုကွယ်...ငရဲမကြီးအောင်အာပတ်ဖြေနည်းတွေရှိပါတယ်..။ပြီးမှ အာပတ်ဖြေနည်းသင်ပေးမှာပေါ့...။အခန်းထဲသွားကြရအောင်နော်မောင်လေး..။ဒေါ်သက်ထားနဲ့ဇော်ဇော်အောင်ဟာ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ဒေါ်သက်ထားတို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်.။ဒေါ်သက်ထားဟာ ဇော်ဇော်အောင်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီး သူမရဲ့ညအိပ်ဝတ်စုံကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်.သူမရဲ့မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းကိုယ်လုံးကြီးကြောင့်ဇော်ဇော်အောင်ရင်တွေအရမ်းကိုခုန်လာပါတယ်..။သူ့ရဲ့ဒုတ်ကလည်း ဆေးစွမ်းကြောင့်ပေါက်ကွဲမတတ်တင်းရင်းနေပါပြီ..။မိန်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတာကြောင့် ဘယ်လိုလိုးရမှန်းသူမသိပါဘူး..။ဒေါ်သက်ထားက မာန်ဖီနေတဲ့ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကြီးကို သူမလက်နဲ့နောက်ပြန်ကိုင်ရင်း ဇော်ဇော်အောင်အပေါ်ကနေခွထိုင်လို့ သူမရဲ့ရွှေရောင်အမွေးနုလေးတွေနဲ့ဖုံးနေတဲ့အဖုတ်ဝထဲကိုဖြည်းညှင်းစွာ သွင်းလိုက်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်ပါတယ်.။ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့
အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ လူပျိုလီးတံကြီးဟာ သူမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးဝင်သွားသလို ဇော်ဇော်အောင်အဖို့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုသူ့လီးဝင်သွားတဲ့ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာတင် စွဲသွားပါတော့တယ်.။ဒေါ်သက်ထားရဲ့လက်နှစ်ဖက်က ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး သူမရဲ့ပေါက်စီအရွယ်သာသာနို့နှစ်လုံးပေါ်ကိုတင်ထားစေပါတယ်..ပြီးတာနဲ့ဇော်ဇော်အောင်ရင်ဘတ်ကို
သူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာအယာဖွဖွလေးထောက်ကာ ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းလိုက်ပြီး သူမဖင်ကိုကြွလိုက်ကာ အပေါ်မှ ခွပြီး ဆောင့်ပါတော့တယ်ဖွတ်ဖွတ်..ဘုတ်ဘုတ်..ရှီးရှီး..အားအားစောက်ပတ်ထဲဝင်လာတဲ့ဇော်ဇော်အောင်လီးကို သူမစောက်ပတ်အတွင်းသားနံရံတွေနဲ့ညှစ်ညှစ်ပြီးဇော်ဇော်အောင်ကို လိုးရတဲ့အရသာပိုကောင်းအောင် ပညာပြပေးပါတယ်..။ဇော်ဇော်အောင်အဖို့ကတော့ ခုချိန်မှာဒေါ်သက်ထားကို သူ့မိတ်ဆွေဦးခင်ထွန်ူရဲ့မိန်းမဆိုတာမေ့နေပါပြီ.။သူ့လက်ကဒေါ်သက်ထားရဲ့နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ပြီးကစားပေးသလို..ဒေါ်သက်ထားရဲ့နို့သီးလေးတွေကိုလည်း လက်မနဲ့လက်ညိုးကိုအသုံးပြုပြီးချေပေးနေတာကြောင့်ဒေါ်သက်ထားမှာလည်းရမ္မက်အဟုတ်တွေကပိုမိုကြွနေပါတယ်.ပြီးတော့ဆံစတွေက နို့နှစ်လုံးပေါ်ဝဲကျနေတော့ ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူမရဲ့နို့တွေကခုန်နေတာက ဇော်ဇော်အောင်အတွက် ပိုပြီးဇောကြွလာစေပါတယ်..စောက်ပတ်ထဲလီးဝင်/ထွက်သံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေပါတယ်ဖွတ်ဖွတ်ဘွတ်ဘွတ်...ရှီးအားအား.အိုးအိုး..ဇော်ဇော်အောင်ပါးစပ်မှ ညဉ်းသံထွက်လာပြီး လီးထပ်မှကျဉ်သလိုလိုဖြစ်လာကာလရေများကို ဒေါ်သက်ထားစောက်ပတ်ထဲပန်းထုတ်လိုက်သလိုဒေါ်သက်ထားကလည်း တအင်းအင်းနဲ့ စောက်ရည်များပန်းထုတ်လိုက်ကာဇော်ဇော်အောင်အပေါ်ထေပ်ရက်မှာက်ကျသွားပါတော့တယ်.
(၁၀)ဒေါ်နီလာတစ်ယောက်မြို့ထဲမှာ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ထွက်လာပါတယ်..။ဒေါ်နီလာဟာအသက်(၄၀)လောက်ရှိပါပြီ.ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်ကမယ်ဘွဲ့ရဖူးတာကြောင့် အခုအချိန်ထိလည်းသူမအနေနဲ့ကျန်းမာရေးလိုက်စားတာကတစ်ကြောင်း အလှအပကိုထိန်းသိမ်းတာကြောင့်တစ်ကြောင်းအခုအချိန်မှာလည်း သူမဟာအပျိုကြီးလို့ထင်အောင်လှပနေဆဲပါပဲ.။လင်ဖြစ်သူကလည်း ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးတစ်ဦးပီပီ မအားလပ်တာကြောင့် သူမကိုသိပ်ဂရုမစိုက်အားပါဘူး.။ုပြီးတော့ အငယ်တစ်ယောက်လည်းရှိနေတယ်လို့ ကြားတယ်လေ။ သူမအနေနဲ့မခံချင်ဖြစ်မိပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။သူမနဲ့သူနဲ့ကလည်း ကလေး(၂)ယောက်ရခဲ့ပြီကိုး။။ယောင်္ကျားတွေဟာဒီလိုကြီးပဲလားလို့တွေးမိတယ်။အတွေးပင်လယ်ထဲစီးမျှောနေတဲ့သူမအဖို့ အနောက်မှတတီတီကားဟွန်းသံကြောင့် သတိဝင်လာပါတယ်.။သူမရောက်နေတဲ့နေရာက လူရှင်းတဲ့ဆင်ဖြေဖုံးရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လူကလည်းရှင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားကိုလမ်းဘေးချပြီး နောက်ကားကိုဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ကကားကို ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ အမှတ်မထင်ကြည့်မိတော့..ဟင်..ဇော်ဇော်အောင်ပါလား..။ဘေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့။ဇော်ဇော်အောင်ကိုသူမသိသည်။ ဘော်ဒီတောင့်တောင့်နှင့်ယောင်္ကျားပီသပြီး ပိုက်ဆံရှိသည်။စီးပွားရေးလုပ်တာကောင်းသည်။ သူမယောင်္ကျားနှင့်ပင်မကြာခဏ လုပ်ငန်းသဘောအရဆုံဆည်းတတ်သဖြင့် သိနေသည်။အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွဲခဲသဖြင့် ယခုလိုတွေ့ရသောမြင်ကွင်းကထူးဆန်းနေသည်။ကားက သူမသွားနေသော လမ်းထိပ်ကခြံဝင်းထဲသို့ ၀င်သွားသည်ကိုမြင်ရသည်။စိတ်ဝင်စားသွားသဖြင့် သူမလိုက်စပ်စုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်.။
(၁၁)ဒေါ်နီလာတစ်ယောက်ကားကို သူမရပ်ထားတဲ့နေရာမှာ ထားခဲ့ပြီး လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်.။ဇော်ဇော်အောင်နဲ့ ထိုအမျိုးသမီးက သူတို့ကားရပ်တဲ့ခြံထဲကို တစ်ယောက်ခါးတစ်ယောက်ဖက်ပြီးဝင်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။လူအရိပ်အခြေကို(၅)မိနစ်လောက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီး.ဒေါ်နီလာတစ်ယောက်ခြံထဲကိုခိုးဝင်သွားပါတယ်။အိမ်တံခါးတွေကို ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ပါတယ်။သစ်သားအိမ်တစ်လုံးဖြစ်တာကြောင့် ချောင်းစရာရှိမှာပဲဆိုပြီး ဒေါ်နီလာလိုက်ရှာနေပါတယ်..အိမ်ထဲမှတခိုးခိုးတခစ်ခစ်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရီသံကိုကြားရပါတယ်.။ဒီအသံကိုသူမကြားဖူးသလိုလို ထင်မိပေမဲ့ ဘယ်သူ့အသံမှန်းစဉ်းစားမရ.ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုသိနေတာပါ.။ဒါကြောင့် နံရံမှာအပေါက်သေးလေးတစ်ပေါက်တွေ့တာနဲ့ ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်...။အို..ခ်ခ်..အင်း..အား...မောင်..အား..မမမခံနိုင်တော့ဘူး..တော်ပါတော့..အင်းအင်းတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဒေါ်နီလာအံ့သြသွားပါတယ်..ဦးခင်ထွန်းမိန်းမသက်ထားပါလား.ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတာ..ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းကိုယ်လုံးတီးနဲ့ သက်ထားရှေ့မှဒူးထောက်ပြီး သူ့ရဲ့မျက်နှာကသက်ထားရဲ့ပေါင်ခွကြားမှာကပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်..ဘာဂျာမှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာ အခုမှအပြင်မှာနီလာအဖို့ အရှင်လတ်လတ်တွေ့ဖူးတာပါ..သူယောင်္ကျားကရွံလို့ ဘုန်းနိမ့်မှာစိုးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တစ်ခါမှလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး..သက်ထားကြည့်ရတာ အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြည်ရောက်နေသလိုပါပဲ..`ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ ခေါင်းကြီးကိုသူမလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူမဖင်ကြီးတွေကလည်းတုန်နေပါတယ်.အို..မောင်မမပြီးသွားပြီ..လို့ပြောသံကြားပါတယ်.ပြီးတာနဲ့ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး လေးဖက်ထောက်ကာ ဇော်ဇော်အောင်က နောက်မှနေပြီး လိုးနေတာကိုတွေ့ပါတယ်..သက်ထားတစ်ယောက်လင်ငယ်ကို အပြတ်ကုန်းနေတာကတော့ ရက်စက်ပါတယ်..ပါးစပ်ကလည်း။။။အို..မောင်.အို.မောင်..အင်းအင်းနဲ့ကိုအေ်ာနေတာကိုတွေ့ပါတယ်.ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကြီးကလည်းစံချိန်မှီလီးကြိးပါပဲ..။
ဒေါ်နီလာကြည့်ရင်းနဲ့ သက်ထားနေရာမှာ အစားထိုးဝင်ချင်တဲ့စိတ်တွေက တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်..သူမစောက်ပတ်ထဲကလည်း အလိုးခံချင်လို့ စောက်ရည်ကြည်လေးတွေ စီးဆင်းလာတဲ့အပြင်သူမလက်ကလည်းသူမစောက်ပတ်ကို နှိုက်ပြီးပွတ်ပေးနေမိပါတော့တယ်။ကြည့်နေတုန်းမှာပင် ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကပိုသွက်လာပြီး သက်ထားကလည်းသူ့ဖင်ကြီးကို အစွမ်းကုန်ကော့ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရပြီးတအင်းအင်းတအားအားနဲ့နှစ်ယောက်လုံးပြီးသွားတာကို မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
(၁၂)နီလာ..သေချာလို့လားဟယ်..ညည်းပြောတာက..သစ်တောအရာရှိကတော် ဒေါ်မျိုးမျိုးက ဖဲကိုစီရင်းပြောလိုက်ပါတယ်.။ဒေါ်နီလာအိမ်မှာ လူစုံနေပါတယ်...မြို့ထဲကသူဌေးမိန်းမတွေအရာရှိကတော်တွေဟာ အားနေသူများပီပီအပျင်းပြေဖဲရိုက်နေကျပါ..ချိန်းပြီးတော့နေ့တိုင်းဖဲရိုက်ကြရင်း.အညှီအဟောက်ကိစ္စတွေကိုပြောနေကျပါ.သူမတို့လောကမှ လင်ငယ်နေတာတို့ဖဲရိုက်တာတို့က ထမင်းစားရေသောက်အလုပ်တွေပါ.ယောင်္ကျားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း စမောရှိတာများတာကြောင့် သူမတို့လောကမှာလင်ငယ်နေတာကဖက်ရှင်တစ်ခုလိုပါ။လင်ငယ်ချောလို့ကတော့ မွေးထားပြီး တစ်လှည့်စီကုန်းနေကျပါ။လင်ငယ်တစ်ယောက်ကို နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖိုက်ခိုင်းတာတို့ သုံးယောက်တစ်ယောက်လေးယောက်တစ်ယောက်ဖိုက်ခိုင်းတာတို့ကမဆန်းပါဘူး။ယခုလည်း ဒေါ်နီလာကဖောက်သည်ချတာကြောင့် ဖဲဝိုင်းကမိန်းမတွေဟာဖဲဝိုင်းထဲအာရုံမရောက်ကြဘဲဒီကိစ္စကို အာရုံရနေကြတာပါ။သေချာတာပေ့ါမမျိုးရယ်..ကျွန်မကိုယ်တိုင်မြင်တာ..အားကျစရာကြီး..ဇော်ဇော်အောင်ကို လင်ငယ်တော်နေတာ..ကုန်းလိုက်တာမှကောင်မက..ဟီးမထင်ရဘူး..ကြည့်ရင်အေးသလိုလိုနဲ့..အေးပါကောင်မရယ်တွေးကြည့်ရုံနဲ့တောင်ရင်ဖိုတယ်..စခန်းမှူးကတော်သီသီဆွေကလည်း ၀င်ပြောလိုက်ပါတယ်.နဲတဲ့ဒုတ်ကြီးမဟုတ်ဖူးသိလား..ဒစ်တော့ပြုတ်နေပြီ..သက်ထားဆိုတဲ့ကောင်မကအပီသင်ပေးထားလို့ဖြစ်မှာပေါ..သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော် ဖူးဖူးကလည်းဝင်ပြောပါတယ်။အားကျလိုက်တာဟာ..ခ်ခ်..သူမတို့ဝိုင်းမှ ထိုအကြောင်းပြောရင်း တစ်ခစ်ခစ်ရီနေကြပါတယ်.။ကဲဝိုင်းသိမ်းကြရအောင်..ကိုယ်တို့အပြာကားလေးကြည့်ရင်းအာသာဖြေကြတာပေါ့ဆိုပြီးနီလာက
(၁၃)ဇော်ဇော်အောင် ဒီနေ့အလုပ်ရုံကိုလာရာမှမလန်းမဆန်းဖြစ်နေပါတယ်...တပည့်ကျော်မောင်ထွန်းဖျော်တိုက်သော ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ကိုသောက်သော်လည်း မလန်းမဆန်းဖြစ်နေသည်..။ဒေါ်သက်ထားနှင့် မနေ့ညက သူမမိတ်ဆွေ၏ တိုက်ခန်းမှာ ချိန်းတွေ့ပြီး တစ်ညလုံးပွဲကြမ်းခဲ့တာလဲပါသည်..။မသင့်တော်မှန်းသိပေမဲ့ ဒေါ်သက်ထားချိန်းတိုင်းသူမငြင်းမိ။သူ့စိတ်ထဲကငြင်းမိပေမဲ့ဒေါ်သက်ထားနှင့်တွေ့လျင် ရမ္မက်ဇောကိုသူလွန်ဆန်နိုင်ဖို့ခက်နေသည်..။အားတိုင်းချိန်းပြီးလိုးမိနေသည်။ လင်ရှိမယားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် ထိုသူကလည်းသူ့မိတ်ဆွေဦးခင်ထွန်းဖြစ်နေတာဆိုးသည်။ဒီဇာတ်လမ်းကိုသူဆက်ဆက်မိနေတာဆိုးသည်.။ခေါင်းထဲမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာနဲ့..စားပွဲပေါ်မှာပုံနေတဲ့စာရင်းဇယားတစ်ထပ်ကြီးကို သူမကြည့်ဖြစ်သေး။သူ့ပွဲရုံဆိုတော့လည်း သူ့လက်သူ့ခြေဘဲလေ။ဆရာ..ဖုန်း..ဆရာ့သူငယ်ချင်းတိုးအေးတဲ့။တပည့်ကျော်မောင်ထွန်းက အားသွင်းထားသောဖုန်းကို ယုလာပြီးသူ့ထံပေးလိုက်သည်။သူငယ်ချင်း..ပြော..ဘာအကူအညီလိုလို့လဲ..သူ့သူငယ်ချင်းတိုးအေးကား သူ့လောက်မချမ်းသာ..သူ့ဆီလည်းဖုန်းဆက်ခဲသည်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိ.တိုးအေးနှင့်သူကားငယ်ကတည်းကညီအကိုလိုပေါင်းလာတာဆိုတော့ပြောမနာဆိုမနာတွေ.။တိုးအေးကား သစ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လို့သူသိထားတာ။သူငယ်ချင်းပြောလေ..ဘာဖြစ်လို့လဲ..ဟိုကွာ.ဇော်ဇော်အောင် ငါ့ကိုကူညီပါဦးကွာ...ငါအဖမ်းခံနေရတယ်ကွ..သစ်မှုနဲ့ဟင်မင်းကလည်း..ဖြစ်ရမယ်..အဲ့ဒါကြောင့် တရားဝင်ပဲလုပ်ပါဆိုမှ.တိုးအေးကားသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်..။တိုးအေးခိုးထုတ်လာသော သစ်များသယ်ဆောင်လာသောကားကို မြို့မှစခန်းမှူးနှင့်သစ်တောအရာရှိပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးထားသည်တဲ့။ဇော်ဇော်အောင်ကား လူကြီးပိုင်းများနှင့်လည်းဝင်ဆံ့သဖြင့် သူ့အတွက် လမ်းကြောင်းရှာပေးခိုင်းသည့်သဘော။ဇော်ဇော်အောင်အတွက် ဒါကမဆန်း ပွဲရုံလုပ်ငန်းလုပ်နေသူပီပီသူကိုယ်တိုင်လည်းဒါမျိုးနှင့်မကင်း။မကြာခဏဆိုသလို..ဒါပေမဲ့ ထိုစခန်းမှူးတို့ သစ်တောအရာရှိတို့ကသူ့လုပ်ငန်းနှင့်သိပ်မဆက်စပ်သဖြင့်မရင်းနှီး.။သူ့လုပ်ငန်းအတူတူလုပ်သည့်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော့ရှိသည်။မေးကြည့်ဦးမှပါ..တိုးအေးနှင့်ဖုန်းပြောပြီးချလိုက်ပြီးနောက်
သူ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ သူ့မိတ်ဆွေကား သစ်လုပ်ငန်းရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့အဆက်အစပ်ရှိသည်။မိတ်ဆွေဖြစ်သူက အကြံဥာဏ်ပေးသည်..။သူတို့ကတော်တွေဆီဝင်မှအဆင်ပြေမှာတဲ့..သူတို့ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြောလျှင်တော့ အခြေအနေဆိုးနိုင်သည်။ကတော်တွေဆီက၀င်မှတဲ့လေ..သူ့မိတ်ဆွေကတော့ သူမတို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည်ပြောတာပဲလေ..။တိုးအေးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်မည်..နို့မို့ဆိုထောင်ထဲမှာဝင်ရမည့်အပေါက်..တိုးအေးအခြေအနေက..။အဆင်ပြေအောင်ကြည့်လုပ်မှပါလေ..ဒီခေတ်ကြီးက ငွေဆိုတာလူ့သည်းခြေကြိုက်မဟုတ်လား..။
(၁၄)ဖွင့်ထားသောအဲကွန်းကတော့ အခန်းထဲမှာအေးစိမ့်နေသည်.။ဒေါ်မျိုးမျိုးကား အိမ်ခန်းထဲမှထွက်မလာသေး။ဇော်ဇော်အောင်နှင့် သူ့မိတ်ဆွေလမ်းညွှန်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်မျိုးမျိုးတို့အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့်နေတာ(၁၅)မိနစ်ခန့်ရှိပြီ။သူ့မိတ်ဆွေကတော့ဖုန်းဖြင့်ပြောပြီးသားလို့ပြောသားပဲလေ။အိမ်ဖော်ကောင်မလေးက..ဖျော်ရည်ခွက်ကိုလာချရင်း.။အကို စောင့်ပါဦးနော်..မမထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးကား အခန်းထဲမှာအလှပြင်နေသည်..အပြင်မှာဇော်ဇော်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရောက်နေပြီ.သူမက ကိုယ်လုံးအလှပေါ်စေမည့် ကျပ်ထုပ်နေသော အသားခပ်ပျော့ပျော့အ၀တ်အစားများကိုဝတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုနှုတ်ခမ်းနီပါးပါးဆိုးလိုက်သည်..မျက်နှာကိုလည်းမိတ်ကပ်နည်းနည်းအုပ်လိုက်ကာ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးတွင် လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်သည်။စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုမှ အခန်းပြင်သို့ထွက်လိုက်သည်။သြော် ကိုအောင်မြင့်လွှတ်လိုက်တဲ့သူထင်တယ်..သူမထံသစ်ကိစ္စဖြင့်မကြာခဏရောက်တတ်သောကိုအောင်မြင့်မှ ဖုန်းဖြင့်ဆက်ပြီးပြောထားပြီးသားလေ။ဇော်ဇော်အောင်က သူ့မိတ်ဆွေတိုးအေး သစ်ဖမ်းခံရသည့်ကိစ္စနှင့်ရောက်လာမည်တဲ့..။သူမစိတ်ထဲကတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကိုအောင်မြင့်ရေဟု ဖုန်းဆက်ပြီးပြီးချင်း စိတ်ထဲကပြောမိသည်။ဇော်ဇော်အောင်ကား ဒေါ်မျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြိးတော်တော်လှတာပဲဟုတွေးမိသည်။အရာရှိကတော်ဆိုတော့ အငြိမ်းစားနေရတာလဲပါမှာပေါ့လေ။ဒေါ်မျိုးမျိုးက.ဇော်ဇော်အောင်ရှေ့ခုံတွင် ထိုင်လိုက်သည်..။သောက်ဦးနော်မောင်လေး..ကိုအောင်မြင့်ပြောထားပြီးလို့အားလုံးသိပြီးပါပြီ..။အားလုံးအဆင်ပြေအောင်အမလုပ်ပေးမယ်..ဒီလိုပါပဲ တစ်ခါတစ်လေတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အထက်ကလည်းဖိအားပေးတယ်လေ..ဟင်းဟင်းဒေါ်မျိုးမျိုးက ကိုယ်ကိုအသာကိုင်းရင်းပြောလိုက်ပါတယ်.အင်္ကျီလည်ဟိုက်ဝတ်ထားပြီး ကြယ်သီးတစ်လုံးကိုဒေါ်မျိုးမျိုးကကြိုတင်ဟထားတာကြောင့်သူမရဲ့သားမြတ်တွေကဇော်ဇော်အောင်အဖို့ ကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရမှာကို ဒေါ်မျိုးမျိုးသိနေပါတယ်။ကောင်လေးမျက်လုံးကသူမရင်သားပေါ်ကမခွာတာကြောင့် ကျေနပ်သွားမိတယ်။ဇော်ဇော်အောင်က အမ တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့နော်ဆိုပြီး စာအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုပေးပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးအဖို့ ဒါကိုစိတ်မ၀င်စားပါဘူး..သူမစိတ်ဝင်စားတာကဇော်ဇော်
ဒါကြောင့် ခါတိုင်း သစ်ကုန်သည်တွေကပိုက်ဆံပေးရင် အငမ်းမရယူတတ်ပေမဲ့.ဒီတစ်ခါမှာတော့.မလိုပါဘူး.မောင်လေးရယ်..မင်းသူငယ်ချင်းက မသိလို့ဖြစ်တာပဲ.နောက်ဆိုဆင်ခြင်ဖို့ပြောပေါ့..အမတို့ကနားလည်ပါတယ်..အိမ်ဖော်မလေးကတော့ ဒေါ်မျိုးမျိုးဒီလိုပြောတာကို ပထမဆုံးတွေ့ဖူးလို့ထူးဆန်းနေတာပေါ့မျက်နှာကလည်းပြုံးနေတာပဲ..ဒီနေ့ဒေါ်မျိုးမျိုးမျက်နှာက...ဇော်ဇော်အောင်က..အမပြီးတော့အကူအညီတောင်းစရာရှိလို့..စခန်းမှူးကတော် မသီသီဆွေက အမနဲ့ခင်တယ်ဆိုလို့..သူ့ကိုရော..သြော်..သီသီက ဒို့ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းလေ..ညီအမလိုချစ်ကြတာ..ဒို့ကူညီရင်ဖြစ်ပါတယ်...အဆင်ပြေမပြေကို ငါ့မောင်ကို အမပြောပေးမှာပေါ့..။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ..ဇော်ဇော်အောင်တော်တော်လေးဝမ်းသာသွားပါတယ်.။ဒေါ်မျိုးမျိုးကိုအဲ့လိုသဘောကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်မိပါဘူး။အခုတော့ တော်တော်လေးသဘောကောင်းတာပဲ.ဒေါ်မျိုးမျိုးက သူပေးသောပိုက်ဆံတွေထည့်ထားတဲ့စာအိတ်ကိုပါပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.။သူက..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အမ.ရပါတယ်မောင်လေးရဲ့..အမကမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းကိုယ့်မောင်လေးလိုခင်မိလို့ကူညီတာပါ..။အမ သီသီဆွေကိုပြောထားလိုက်မယ်လေ..။ငါ့မောင်သူငယ်ချင်းအတွက်ဘာမှမပူနဲ့..အမကိုတစ်ခုသာကူညီ.ဘာများလဲအမ..ဟိုလေအမမြို့ထဲမှာ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ချင်လို့..ကြည့်ထားတာတော့ရှိတယ်..။မင်းကဒီမြို့သားဆိုတော့ ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းပေါတယ်လေ..။အဲ့ဒါတစ်ရက်လိုက်ကြည့်ပေးပါလား။ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အမ။ဘယ်နေ့လာခဲ့ရမလဲအမ။ဒေါ်မျိုးမျိုးက လာမယ့်သေကြာနေ့လောက်ဆိုရပါတယ်...ဇော်ဇော်အောင်လည်း ၀မ်းသာစွာနဲ့ဒေါ်မျိုးမျိုးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အမကျွန်တော်ပြန်ဦးမယ်နော်..အင်းအင်း.ပြန်ပြန်မောင်လေး..ဒေါ်မျိူးမျိုးကပြုံးရင်းပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်..။ဇော်ဇော်အောင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့
တင်သားကြီးတွေနဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနီးပါးမြင်လိုက်ရတဲ့ သူမရဲ့ရင်သားထွားထွားကြီးတွေက စိတ်ထဲမှာ အိမ်ပြန်လမ်းထိ မြင်ယောင်နေပါတော့တယ်။
(၁၅)အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ ဖုန်းကမည်လာပါတယ်..။ရန်ကုန်ကမိတ်ဆွေတစ်ဦးကဆက်တာပါ..ကားကိုခဏရပ်ရင်း..။ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ဆီကပို့လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်တာကြောင့်ပိုက်ဆံတွေကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကလွှဲလိုက်တဲ့အကြောင်းလှမ်းဆက်လိုက်တာပါ.။မှတ်ပုံတင်ကလည်း အဆင်သင့်ပါလာတာရယ် လမ်းကလည်းတိုက်နေတာရယ်ကြောင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်ဘက်ကို ကားကိုမောင်းလိုက်ပါတယ်။ကားပေါ်ကဆင်းပြိး ဘဏ်ထဲကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်.။ဒီနေ့က တနင်္လာနေ့မို့ထင် ဘဏ်ထဲမှာ ငွေထုတ်/ငွေသွင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေတာကြောင့်ခဏစောင့်ဆိုင်းနေလိုက်ပါတယ်..ဘဏ်က ဧည့်သည်တွေထိုင်တဲ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေစဉ် အနီးမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေပါတယ်.သူမကဖုန်းပွတ်နေတာပါ..ဇော်ဇော်အောင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ အသာမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်...သူ့ရင်ထဲဒိန်းခနဲဖြစ်သွားပါတယ်..ဝေေ၀အောင်ပါလား..။ဝေေ၀အောင်ကလည်း
သူ့နားလာထိုင်တဲ့သူဟာ သူ့ဝမ်းကွဲအမသီရိရဲ့အရင်ရည်းစားဇော်ဇော်အောင်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရလို့ အနည်းငယ်လန့်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်...။ဇော်ဇော်အောင်ဟာသီရိနဲ့ရုတ်တရက်မှားမလိုဖြစ်ပြီးနှုတ်ဆက်မလိုဖြစ်ပြီးမှ.အသာလေးနှုတ်ပြန်ပိတ်နေလိုက်ပါတယ်..တော်တော်တူတာပါလား..သီရိနဲ့လို့ တွေးနေမိပါတယ်..။ငါ့ညီမက အကိုတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေတာလားလို့..လို့ပါးစပ်ကနေ လွှတ်ခနဲမေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်..သမီးက အကိုတို့ရပ်ကွက်ထဲကပါ..သမီးက ကျောင်းဆရာမပါ...အကိုတို့မြို့မှာတာဝန်ကျလို့..အကိုတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်ငှားနေတာ။သြော်..ဟုတ်လား.အကူအညီလိုရင်ပြောနော်..ညီမလေး။ဟုတ်..အကို..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အကိုငွေလွဲလာထုတ်တာလား..ဟုတ်တယ်ညီမလေး.ညီမလေးရော..သမီးက အဖေအမေတို့ဆိငွေလွဲပေးမလို့..သြော်..သမီးအလိမ္မာလေးပဲလို့ ဇော်ဇော်အောင်တွေးမိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ဒီနေ့အဖို့ဇော်ဇော်အောင် ငွေလာထုတ်ရတာထက် ဝေေ၀အောင်နဲ့တွေ့ရတာကို ပိုပျော်သလိုလိုဖြစ်တာပေါ့လေ။သီရိရယ်..မင်းကို ကိုယ်အခုအချိန်ထိ မမေ့နိုင်သေးပါလားနော်..ဝေေ၀အောင်က မင်းနဲ့တူလိုက်တာဟာ..လို့ရင်ထဲကပြောနေမိပါတယ်။
(၁၆)ဇော်ဇော်အောင်ဟာ သောကြာနေ့မှာ ဒေါ်မျိုးမျိုးဆိသွားခဲ့ပါတယ်.။ဒေါ်မျိုးမျိုးက အိမ်ရှေ့မှာစောင့်နေတာပါ.။သူမကိုယ်ပေါ်မှာတော့ အပြာရောင်ဘလောက်စ်အင်္ကျီနဲ့ အနက်ရောင်ထမိန်ကို ဆင်မြန်းထားပါတယ်.။ဇော်ဇော်အောင်ဟာသူမရဲ့ဖွံ့ထွားလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ပြီး သူနဲ့ချိန်းလုပ်နေကျ ဒေါ်သက်ထားကို မြင်ယောင်မိပါတယ်..။သဘက်ခါဒေါ်သက်ထားနဲ့ ဆင်ခြေဖုံးကနေအိမ်မှာ ချိန်းထားတာကို သတိရလာပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးဟာ ဇော်ဇော်အောင်မလာခင်ကတည်းက သူမသူငယ်ချင်းစခန်းမှူးကတော်သီသီဆွေနဲ့ ဖုန်းချိတ်ထားပြီးသားပါ။ဒေါ်သီသီဆွေကိုလည်း ကြားရက်မှာဇော်ဇော်အောင်သွားတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါ်သီသီဆွေကလည်း အလန်းကြီးပင်။ကလေးရှိသည်ဟုပင်မထင်ရလောက်အောင် လှပသော အမျိုးသမီးပင်။သီသီဆွေကလည်း ဇော်ဇော်အောင်သူမအိမ်လာစဉ် မျိုးမျိုးလိုပဲသူမခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကို မသိမသာပြပြီးဇော်ဇော်အောင်ကို မြူခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးက ဇော်ဇော်အောင်ကို ဒေါ်သက်ထားလို သူမလင်ငယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြံနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သီသီဆွေနဲ့ သူမကပါတနာတွေလေ..။သီသီဆွေက
သူမနဲ့ဝါသနာတူ စရိုက်တူဆိုတော့ သူမနှင့်သီသီဆွေတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ဇော်ဇော်အောင် နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖိုက်ကြဖို့ စီစဉ်ပြီးသားပါ.။တကယ်တန်းက သူမအိမ်ကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းပြချက်ကောင်းအောင်..ဇော်ဇော်အောင်ကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ဒေါ်သက်ထားနဲ့ ဇော်ဇော်အောင်ဖိုက်တာကို နီလာက ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ပြခဲ့တာကြောင့်သူမတို့ အုပ်စုက ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ ဖိုက်ပုံကိုသဘောကျနေကြတာပါ။ဒါကြောင့် သူ့ထက်ငါဦးအောင် အခုလိုဇော်ဇော်အောင် သူမတို့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အချိန်မှာ အပိုင်ကိုင်ထားဖို့ တိုင်ပင်ထားကြတာပါ။အိမ်က နီလာပိုင်တဲ့အိမ်လေ..။နီလာယောင်္ကျားကလည်းဇော်ဇော်အောင်နဲ့ရင်းနှီးတော့ နီလာကလည်းဇော်ဇော်အောင်ကို ကြံနေသည်။သူမတို့အုပ်စုက လင်ငယ်ထားသည့်နေရာမှာ အလွန်ကျွမ်းကျင်လှသောအုပ်စုတွေလေ။ယခုလည်း.ဇော်ဇော်အောင်ရေ..အမကြည့်မဲ့ အိမ်က.( ....)ရပ်ကွက်ထဲက..ဟုတ်..သိတယ်..အမ..ဇော်ဇော်အောင်က ကားကို ဒေါ်မျိုးမျိုးပေးတဲ့ လိပ်စာအတိုင်းမောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။နေရာကတော့ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊လူရှင်းသောရပ်ကွက်တစ်ခုမှာပင်။
ဇော်ဇော်အောင်နဲ့ ဒေါ်မျိုးမျိုးစီးလာတဲ့ကားက ဒေါ်နီလာရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်.နီလာရေ.မျိုးတို့ရောက်ပြီ..ဇော်ဇော်အောင်က..အမ၀ယ်မဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်က နီလာဆိုတော့ သူသိတဲ့ဒေါ်နိလာများလို့ထင်မိပါတယ်.။အစစ်ပါပဲ..မြို့ထဲက ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုမြင့်မိန်းမ ဒေါ်နီလာ.သြော်..မောင်ဇော်ဇော်အောင်ပါလား...မျိုးပြောတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆိုတာငါ့မောင်ကိုးဒီခြံက အမပိုင်တာလား.ဟုတ်တယ်ငါ့မောင်ရဲ့ မင်းကိုမြင့်တောင် မသိဘူး..အမ၀ယ်ထားတာ..သြော်..အဲ့ဒါဆို မင်းမမမျိုးနဲ့ မင်းနဲ့အိမ်ကြည့်ရင်း စောင့်နေကြဦး..အမမြို့ထဲမှာ ချိန်းထားတာလေးရှိလို့.ဟုတ်..အမသွားလေ..သွားစရာရှိရင်..ဇော်ဇော်အောင်ကား ခြံထဲတွင်လှည့်ပတ်ကြည့်နေစဉ်..ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မျိုးမျိုးကား ခပ်တိုးတိုးအချင်းချင်းပြောလိုက်သည်..။ဟဲ့.မျိုးမျိုး နင်ပီလှချေလား...အပိုင်ကိုင်နော်..ဟင်းဟင်း မျိုးတို့က ပိုင်ပြီးသားပါ..နီလာက သီသီကိုသွားခေါ်လိုက်..ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုကွက်တိပဲ..။ထောင်ဖမ်းလို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်..ဒါမှသူငြင်းလို့မရမှာ.ဇော်ဇော်အောင်ကခြံထဲကနေသူမတို့ရှိရာပြန်လျှောက်လာတာကြောင့် စကားစကိုဖြတ်ပြီး...ကဲ..ဇော်ဇော်အောင်ရေစောင့်နေကြဦးနော်..အမနှစ်နာရီလောက်တော့ကြာဦးမယ်..။အိမ်ပေါ်မှာတီဗွီကြည့်နေကြဦးဆိုပြီး သူမကားကိုမောင်းလို့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးဟာဇော်ဇော်အောင်ကို ဘယ်လိုမြူရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပါတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဇော်ဇော်အောင်ကအိမ်ရှေ့မှာ နိုင်ငံခြားကားတစ်ကားကိုကြည့်နေပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးက နောက်ခန်းဝင်ပြီး ခုံတစ်ခုံကိုတိုက်မိဟန်ဆောင်ပြီး သူမကိုယ်ကိုပစ်လှဲလိုက်ပါတယ်..၀ုန်း။ အနောက်မှ အသံကြားတာကြောင့်ဇော်ဇော်အောင် ဘာများဖြစ်တာလဲလို့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးက..အားကျွတ်စ်ကျွတ်စ်..မောင်လေးရေလာပါဦး..နာလိုက်တာနောက်ခန်းကို ၀င်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်မျိုးမျိုးဟာ ခုံတစ်လုံးနားမှာ လဲနေပြီး သူမခြေဖမိုးကို ဆုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်.။ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ပုံစံက အတော်နာကျင်နေပုံရပါတယ်.။မျက်နှာလေးကိုရှုံ့လို့ပါ။မှန်းစမ်းပါဦး..အမကြည့်ရအောင်...ဇော်ဇော်အောင်ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ခြေဖမိုးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ကြည့်ပါတယ်..အအား..နာတယ်မောင်လေး.ဒေါ်မျိုးမျိုးက အမထရပ်ကြည့်ဦးမယ်..ရတယ်မောင်လေးလို့ဆိုပြီး ထရပ်ကြည့်ပါတယ်။ရုတ်တရက်
သူမကယိုင်လဲသွားတာကြောင့် ဇော်ဇော်အောင်ကလည်း ဖမ်းထိန်းလိုက်ရာက ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ ကိုယ်လုံးကသူ့ရင်ခွင်ထဲယိုင်လဲကျသွားပါတယ်.ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကိုနို့ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ ပိပြားအောင်ကိုဒေါ်မျိုးမျိုးကဖိကပ်လိုက်တာပါ။သူမရဲ့အဖုတ်ကြီးကလည်း
ထမိန်အောင်ကနေ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကြီးကို မသိမသာပွတ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဇော်ဇော်အောင်မျက်နှာရဲသွားတာကို သူမသတိထားမိပါတယ်။ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်..အမမထောက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်..မရိုမသေနော်..မောင်လေး..အမကိုပွေ့ပြီး အခန်းထဲကကုတင်ပေါ်တင်ပေးစမ်းပါ.။အမချော်လဲတာလား..ဟုတ်တယ်မောင်လေး..တိုက်မိတာ..အားကျွတ်စ်ကျွတ်စ်
(၁၇)ဇော်ဇော်အောင်ကား ရင်တွေတဒိုင်ဒိုင်းခုန်နေပါတယ်.ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ ဒကောက်ကွေးနေရာကနေ လက်တစ်ဖက်နဲ့မထားပြီး တစ်ဖက်ကဒေါ်မျိုးမျိုးဂျိုင်းအောက်ကို လက်လျှိုလို့မလိုက်ပါတယ်..။တင်းရင်းလှတဲ့ဒေါ်မျိုးမျိုးတင်ပါးကြီးတွေက ၀ိုင်းစက်နေတာပါ..အိစက်နေတဲ့နို့ကြီးတွေကလည်း သူ့ရင်ဘတ်ကိုဖိကပ်နေပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးလက်ကလည်း သူ့လည်ပင်းကုို လှမ်းကိုင်ထားတာကြောင့် ဒေါ်မျိုးမျိုးမျက်နှာနဲ့သူ့မျက်နှာဟာနီးနီးကပ်ကပ်ကိုရှိနေတာပါ.ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့တွေကို
ရနေပြီး.ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးကထွက်တဲ့ ၀င်လေထွက်လေတွေက သူ့မျက်နှာကိုပါရိုက်ခတ်တဲ့အထိ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတာပါ..။မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ဒေါ်သက်ထားသင်ပေးထားလို့ ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူဟာလိုးချင်စိတ်တွေတဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပြီး.သူ့ရဲ့ဒုတ်ကြီးကလည်းထောင်ထလာတာကြောင့်မနည်းကိုစိတ်ထိန်းနေရပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးက မောင်လေး အမကို ကုတင်ပေါ်မှာ ချရင်ဖြည်းဖြည်းချနော် ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဗျာ..သြော်အမကို ကုတင်ပေါ်မှာချတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချလို့..အမကကြောက်တတ်လို့ဒေါ်မျိုးမျိုးကသိပါတယ်..ကောင်လေးစိတ်ကြွလာအောင်ဖန်တီးနေတာပါ..။အခန်းထဲကကုတင်ပေါ်အရောက်မွေ့ယာပေါ်အတင်မှာ ယိုင်ချင်ယောင်ဆောင်လို့ဇော်ဇော်အောင်ကို ဆွဲလှဲလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ကိုယ်က သူမကိုယ်ပေါ်ကို ထပ်ရက်ကြီးဖိကပ်သွားပါတော့တယ်..အို.ဆောရီးအမ..ဇော်ဇော်အောင်ကပျာပျာသလဲလဲတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်..ဒေါ်မျိုးမျိုးက ပြီတီတီမျက်နှာနဲ့ သူ့ခါးကုိုလှမ်းဖက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒုတ်ကြီးက ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့အဖုတ်ကိုထမိန်ကိုဖောက်ပြီးကျွံသွားမတတ် ထောက်မိနေပါပြီ..သူ့စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး.ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့လည်ပင်းတွေကို နမ်းရှိုက်နေပါပြီ..ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းကြမ်းပါတယ်..ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့
ဇော်ဇော်အောင်ကလည်း သူမအင်္ကျီကြယ်သီးကို ဖြုတ်ပြီးနို့တွေကိုပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးနေသလိုသူမရဲ့ထမိန်ကိုလည်းဆွဲချွတ်လိုက်တာကြောင့်သူမဖင်ကိုအသာကြွံပေးပြီးချွတ်ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.သူမရဲ့လက်ကလည်းမြန်ပါတယ်..ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကို လက်နှိုက်ပြီးဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ဒုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ကာကစားနေပါပြီ..။
ဇော်ဇော်အောင်ဟာ ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့နို့သီးလေးတွေကို လျှာနဲ့ကစားပေးနေပါတယ်..နို့သီးလေးတွေကို နို့အေးချောင်းစုပ်သလိုစုပ်ပေးတဲ့အခါမှာ ဒေါ်မျိုးမျိုးဟာ တအင်းအင်းတအဲအဲနဲ့ ဖီးလ်တက်နေပါပြီ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့
ဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးတွေ..ပြီးတာနဲ့ အောက်ဖက်ပေါင်ခွကြားမှာ ရှိနေတဲ့ပင်တီလေးကို လက်နဲ့ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆီးခုံမှာ ရွှေရောင်အမွေးနုလေးတွေနဲ့လိမ်ကောက်နေတဲ့ ကြားက ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ အဆီတစ်ထပ်အသားတစ်ထပ်နဲ့ ပြူဝင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်အမြောင်းကြီးကိုတွေ့ရတာတော့ပါပဲ။ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အရာရှိကတော်တစ်ယောက်ပီပီ.အကောင်းစားပစ္စည်းတွေသုံးပြီးဆေးကြောထားလို့ထင် အနံ့ကတော့လုံးဝထွက်ခြင်းမရှိပါ။မိန်းမတွေဟာ ဘာဂျာမှုတ်ခံတာကိုကြိုက်မှန်းဒေါ်သက်ထားကတည်းကသူသိပြီးသားပင်။ဒါကြောင့်ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့အစိလေးကိုလျှာနဲ့ဖိယက်လိုက်တဲ့အခါမှာ.အိုးအိုး..မောင်လေး။။အမမခံနိုင်ဘူး။ဒေါ်မျိုးမျိုးကသူ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးပေါင်ကိုစိလိုက်ပါတယ်..ဒါကြောင့် ဇော်ဇော်အောင်က ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ဖိပြီးအစိကိုသေချာချာကိုဖိပြီး ယက်ပေးလိုက်ပါတယ်..အားအား..အင်းဟင်း..မောင်..မောင်..တော်တော်တော်ပါတော့..ဒေါ်မျိုးမျိုးအသံကငိုသံလေးပါပေါက်လာပါတယ်။ဇော်ဇော်အောင်က
ဂရုမစိုက်ပဲ ဂရုတစိုက်ယက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာမှာ ဒေါ်မျိုးမျိုးဟာငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်ပြီး တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်...မမကောင်းရဲ့လား။ ဇော်ဇော်အောင်က ဒေါ်မျိုးမျိုးကို လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်..ဒေါ်မျိုးမျိုးက..အမတော့အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပဲမောင်လေးရယ်..မောင်လေးကမမကို ညဉ်းတဲ့အတွက် မောင့်ကောင်လေးကိုရော အမက ပြန်ညဉ်းဦးမယ်ဆိုပြီး ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကို ကောင်းကောင်းလွေပေးပါတော့တယ်..ဇော်ဇော်အောင်ဟာလည်း သူ့လီးကို ဒေါ်မျိုးမျိုးလွေပေးတာကို အရသာရှိရှိခံယူနေပါတယ်.ဒေါ်မျိုးမျိုးက ကျွမ်းကျင်အဆင့်ပါ..။ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လိင်တံကို သူမလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကြိုးစားပန်းစားကို မှုတ်ပေးတာပါ။ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကြီးက ဒေါ်မျိုးမျိုးပါးစပ်ထဲမှ တံတွေးတွေနဲ့စိုစွတ်ပြီး အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ နဂါးတစ်ကောင်လိုထောင်ထလာပါတယ်..ဒါကြောင့် ဒေါ်မျိုးမျိုးကို ကုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး သူကကုတင်အောက်ကမတ်တပ်ရပ်လို့ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ အဖုတ်အ၀လေးကကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ..ကလေးမမွေးဖူးလို့ထင်တယ်လို့ဇော်ဇော်အောင်တွေးမိသည်.သူ့ရဲ့လီးကို ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲကို အသာထိုးထည့်လိုက်တော့ ဒစ်က ၀င်သွားပါတယ်..အအ..ကျပ်နေတာကြောင့် ဇော်ဇော်အောင် အသာလေးချော့သွင်းနေပါတယ်..ဒါကို ဒေါ်မျိုးမျိုးက..မောင်လေး..ဘာလုပ်နေတာလဲ..တစ်ဆုံးထဲ့လိုက်တော့လေ..မမခံချင်လှပြီ...ဆိုပြီးအားမလိုအားမရ ပြောလာပါတယ်။ဇော်ဇော်အောင်ကလည်း အားစိုက်ပြီး အဖုတ်ထဲကို လီးကိုတဆုံးထိစိုက်ချလိုက်ပါတယ်..အအား..သေပါပြီ။။ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်။ အဖုတ်တောင်ကွဲသွားပြီလားမသိဘူး။။ဒေါ်မျိုးမျိုးကငိုမဲ့မဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပါ..သူမသားအိမ်ခေါင်းကိုတောင်ဇော်ဇော်အောင်လီးကြီးကလာထောက်ပါတယ်..အိမ်ကဘဲကြီးလီးထက်ကို ပိုလည်းကြီးပြီးပိုလည်းရှည်တာသေချာတယ်။ဇော်ဇော်အောင်အဖို့လည်း သူ့လီးကို ညှပ်တစ်ခုနှင့်ညှပ်ထားသလို..ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းနံရဲတွေကညှစ်ထားတာကိုခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့လီးထိပ်ကရော ဒေါ်မျိုးမျိုးစောက်ခေါင်းထဲကပါ လိုးတဲအခါမှာ ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေ စီးထွက်လာပါတယ်..ဖွတ်ဖွတ်ဘတ်ဘတ်..အားအား အင်းအင်း။ဆောင့်ပါ..မောင်။။အအ။ မြန်မြန်...အင်းအင်း...ဒေါ်မျိုးမျိူးကား မွေ့ယာပေါ်ခင်းထားသည့် အိပ်ယာခင်းစများကို လက်ဖြင့်ဆွဲဆုပ်ထားပြီး အရူးအမူးအော်ဟစ်နေသည်.။အရမ်းကောင်းနေပြီ..ဇော်ဇော်အောင်လီးကြီးကို သူမအသည်းခိုက်သွားချေပြီ။ဇော်ဇော်အောင်လည်း ဒေါ်မျိုးမျိုးကို လိုးရတာကောင်းနေသည်။သူမယောင်္ကျားရှိတာတွေ...ဒုသနသောတွေခေါင်းထဲမှာမရှိတော့။ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကိုသူ့လီးကြီးဆောင့်လိုက်တိုင်း သူ့လီးနှင့် ဒေါ်မျိုးမျိုး တင်ပါးကြိးတွေရိုက်သံတဘတ်ဘတ်နှင့်ထွက်နေသလို.ဖွတ်ဖွတ်စွပ်စွပ် စသည့် စောက်ပတ်ထဲလီးဝင်/ထွက်သံများကလည်း ဆူညံနေသည်။ဖွတ်စွတ် ပလွတ်..အားအား။။ အားအား။ထွက်ကုန်ပြီမောင်.အအ။ဒေါ်မျိုးမျိုးကားစောက်ရည်များကား မျက်နှာလေးရှုံ့သွားပြီး စောက်ရည်တွေထွက်ကုန်ပြီ.သူလည်းနောက်ဆယ်ချက်ခန့်ထပ်ဆောင့်လိုက်တော့
လရေများကို ဒေါ်မျိုးမျိုးစောက်ပတ်အတွင်းနံရံများကို ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး သူ့လီးမှလရေများနှင့်ဒေါ်မျိုးမျိုးစောက်ရည်များသည် ဒေါ်မျိုးမျိုးစောက်ပတ်မှ
လိမ့်ဆင်းကာ ဒေါ်မျိုးမျိုး၏ ဖင်ခွကြားသို့ စီးကျသွားလေတော့သည်။သူလည်း သူ့လီးကိုဒေါ်မျိုးမျိုးအဖုတ်ထဲတပ်ရက်နှင့်ပင် ကုတင်ပေါ်သို့ ဒေါ်မျိုးမျိုးနှင့်ထပ်ရက်ကြီးကျသွားလေတော့သည်။
(၁၈)ဇော်ဇော်အောင်ကားဒေါ်မျိုးမျိုးအပေါ်သို့ထပ်ရက်ကြီးလဲကျသွားစဉ်မှာပင် ၀ုန်းခနဲအခန်းတံခါးကပွင့်လာသည်။ဇော်ဇော်အောင်ကား ထိတ်ထိတ်ပျာပျာဖြစ်သွားပြီး အ၀တ်အစားများကို ကောက်ဝတ်ရန်ပြင်လိုက်သော်လည်း အချိန်မမှီတော့.ကဲ.ဇော်ဇော်အောင် မျိုးမျိုးကို လုပ်တာကတော့ တဖောင်းဖောင်းနဲ့ အမတို့နှစ်ယောက်တောင်အားကျတယ်...ခ်ခ်..ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်သီသီဆွေကအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။ကဲဒါကိုမျိုးမျိုးယောင်္ကျားကို တိုင်လိုက်ရမလား..။ဇော်ဇော်အောင်အဖို့ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားပါတယ်။အမနီလာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..ဟင်းဟင်း..ဒို့ကစတာပါ.တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းမျိုးမျိုးကိုလုပ်သလိုလုပ်လေ...ဒါဆိုအတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ့..ဟင်းဟင်း..ကဲသီသီရေစလိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီး သီသီဆွေနဲ့ နီလာတို့ဟာကုတင်ပေါ်တက်လာကြပါတယ်။သူမတို့အ၀တ်အစားတွေကိုလည်း
ပြိုင်တူချွတ်လိုက်ကြတာကြောင့် သူမတို့ရဲ့စွင့်ကားတဲ့တင်သားကြီးတွေနဲ့ ဖွံ့ထွားလှတဲ့ နို့ကြီးတွေကို ဇော်ဇော်အောင်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူ့လီးကြီးကပြန်မတ်လာပါတယ်။တဏှာကြီးလှတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိ မိန်းမ(၃)ယောက်နဲ့ဇော်ဇော်အောင်တွေ့နေပါပြီ.။ဒေါ်သီသီဆွေက ဇော်ဇော်အောင်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ မာန်ဖီလာအောင်ပလွေပေးလိုက်ပါတယ်..လီးစုပ်တာကျွမ်းကျင်တာကြောင့် ပိုမိုပြီး ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကြီးက ထောင်ထလာပါတယ်။တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့နို့သီးတွေကို ဒေါ်နီလာကစို့ပေးပြီး တစ်ဖက်က နို့သီးလေးတွေကို ချေပေးနေပါတယ်..ဒေါ်မျိုးမျိုးကလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ပေးပြီး လည်ပင်းတွေကို နမ်းပေးနေတာကြောင့်ဇော်ဇော်အောင်အဖို့
မိန်းမတစ်ယောက်ကလီးစုပ်ပေး၊တစ်ယောက်က နို့စို့ပေး၊တစ်ယောက်ကလျှာချင်း ဖလှယ်နေတာကြောင့် အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြည်ရောက်နေသလို..အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမတွေပီပီယောင်္ကျားတွေကိုကိုင်တွယ်ရာမှာ နိုင်နင်းတာကြောင့်ဇော်ဇော်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို နီလာ၊မျိုးမျိုး၊သီသီဆွေတို့က မိန်းမူးအောင်ပညာစွမ်းပြကြတော့တာပါပဲ.။
အတန်ကြာ ပညာပြကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့.ကဲမျိုးမျိုးရေ နင်ကဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ နို့သီးတွေကို စုပ်ပေးလေ နင်ကနှစ်ခါတောင် ပြီးပြီးသားဆိုတော့.လို့ဒေါ်နီလာက ဒေါ်မျိုးမျိုးကို ပြောလိုက်ပါတယ်..ဒေါ်နီလာက လီးစုပ်ပေးနေရာမှ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကြီးကိုသူမအဖုတ်နဲ့တေ့ပြီး သူမအဖုတ်ထဲထဲ့ကာ အပေါ်မှခွစီးလိုက်ပါတယ်..ဒေါ်သီသီဆွေကဇော်ဇော်အောင်မျက်နှာပေါ်ကိုကားယားခွလိုက်ပါတယ်..မောင်လေးဇော်ဇော်အောင် မင်းလက်က မျိုးမျိုးပေါင်ခွကြားထဲလမ်းနှိုက်လိုက်ပြီး သူ့အစိကို လက်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက်။ဇော်ဇော်အောင်ကို သူမတို့(၃)ယောက်တစ်ယောက်ဖိုက်နေတာပါ..ဇော်ဇော်အောင်ကလည်းသဘောပေါက်မြန်ပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့အဖုတ်ကို သူ့လက်နဲ့လှမ်းနှိုက်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကိုဆွပေးနေပါတယ်..လက်နဲ့လိုးပေးတာပေါ့..သူ့မျက်နှာပေါ်မှာခွထားတဲ့ ဒေါ်သီသီဆွေရဲ့ အဖုတ်ကိုတော့ လျာနဲ့တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒေါ်နီလာတော့ သူမအပိုင်စီးထားတဲ့ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကြီးကို အဖုတ်ထဲ ထုတ်သွင်းလုပ်ကာ ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘွတ်ဘွတ်..အားအား..ရှီးရှီး.ြွ့ပွတ်ပြွတ်ပလပ်ပလပ်...အားအား အင်းအင်း..ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့
စောက်ပတ်ယက်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သီသီဆွေတစ်ယောက် ဖင်ကြီးတုန်ခါပြီး အားရကျေနပ်စွာမည်တမ်းသံတွေထွက်ပေါ်လာသလို.. ဒေါ်နီလာကလည်း ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးကြီးရဲ့သူမစောက်ပတ်ထဲမှာ ၀င်ထွက်နေတာကို ဖီးလ်တက်တဲ့အားရစဖွယ်မည်တမ်းသံတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးကလည်း သူမစောက်စိကိုဇော်ဇော်အောင်လက်နဲ့ပွတ်ပေးတာကို ဖီးလ်တက်တဲ့ အိုးအိုးအင်းအင်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ်.ဇော်ဇော်အောင်ရေ..အားတင်းထား အမထွက်တော့မယ်..အိုးအိုးမောင်လေး.ခပ်သွက်သွက်လေးစုပ်ပေးပါ.အမလဲပြီးတော့မယ်..အင်းအင်းမောင်လေးဇော်ဇော်ဖိဖိပြီး မြန်မြန်ပွတ်အအ..သူမတို့(၃)ယောက်ရဲ့ ညည်းညူသံတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးဇော်ဇော်အောင်ကဒေါ်သီသီဆွေရဲ့ စောက်ပတ်ကို လျှာကိုသုံးပြီးအဆက်အပြတ်ယက်ပေးလိုက်သလိုဒေါ်နီလာရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကလည်းပိုမြန်လာပါတယ်။ဒေါ်မျိုးမျိုးရဲ့ စောက်စိကိုလည်း သေသေချာချာကို လက်နဲ့ဂရုတစိုက်ပွတ်ပေးလို့ ထွက်ခါနီးနေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့
သူမတို့(၃)ယောက်ဟာ စောက်ရည်ကိုယ်စီထွက်သွားလို့ ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်ညဉ်းညူလိုက်သလို..ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့လီးရေတွေဟာလည်း ဒေါ်နီလာစောက်ပတ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အရာရှိကတော်(၂)ယောက်ရဲ့ (၃)ယောက်ပြိုင်တူ လင်ငယ်တော်ခြင်းကိုခံနေရပြီး ဒေါ်သက်ထားနဲ့ပါပေါင်းရင် အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမ(၄)ယောက်ရဲ့လင်ငယ်ဖြစ်နေပါပြီ.။ ထိုမိန်းမ(၃)ယောက်ကလည်း စွမ်းလှပါတယ်။သူ့ကို ကြာကြာလိုးနိုင်အောင် ဆေးတစ်မျိုးသောက်ခိုင်းပါတယ်။ထိုအိမ်ထဲမှာ မိန်းမ(၃)ယောက်ကို တစ်လှည့်စီ သူမတို့လိုးခိုင်းသလိုလိုးပေးနေရပါတယ်။ဒေါ်နီလာက
သူ့ကို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြိးလိုးခိုင်းတာကတစ်ချီ..သီသီဆွေက ဖင်ထောင်ပြီးလိုးခိုင်းတာကတစ်ချီနဲ့ မတ်တပ်လိုးခိုင်းတာကတစ်ချီပါ.။ဒေါ်မျိုးမျိုးကလည်း ဖင်ထောင်ပြီး တစ်ချီလိုးခိုင်းတာကတစ်ချီ။အရာရှိမိန်းမ၊သူဌေးမိန်းမတွေမို့လားမသိ အစားကောင်း၊အသောက်ကောင်းတွေစားပြီးအငြိမ်းစားနေတာကြောင့် ချောမောလှပကြသလောက်တဏှာကလည်းကြိးလှပါတယ်။သူ့အဖို့ကလည်း ထိုမိန်းမ(၃)ယောက်လုံးကို လိုးရတာကို အရမ်းခိုက်သွားပါတယ်။ဒေါ်နီလာက...မောင်လေး မင်းသက်ထားကို လိုးရတာကောဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးမေးမှသာ ဒေါ်သက်ထားနဲ့ သူမတို့အုပ်စု ရင်းနှီးမှန်းသိသွားပါတယ်။ဒေါ်သက်ထားက သူမတို့ကို သူ့ရဲ့အလိုးကောင်းတာတွေ ဘာဂျာအမှုတ်အစုပ်ကောင်းတာတွေကို ဖောက်သည်ချထားလို့တယ်လေ..။ကဲမောင်လေး..နားကြစို့...နောက်အားတဲ့ကျရင် အမတို့(၃)ယောက်ရယ် သက်ထားရယ် အားတဲ့သူအိမ်မှာ တစ်လှည့်စီချိန်းပြီး (၄)ယောက်တစ်ယောက်ဖိုက်ကြတာပေါ့..လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖို့ကတော့ မိန်းမ(၄)ယောက်ရဲ့လင်ငယ်လုံးလုံးဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ ဒိနွံထဲကနေသူမရုန်းထွက်ချင်ပါဘူး.။သူမတို့(၄)ယောက်လုံးကလည်း လိုးလို့အရမ်းကောင်းတာကိုး။သူငယ်စဉ်က သီရိကို ဒါတွေမကျွမ်းကျင်လို့လက်လွှတ်ခဲ့ရပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမ(၄)ယောက်က လင်ငယ်တော်ခြင်းခံရပြီးဝိုင်းသင်ပေးတာကြောင့် အရမ်းကို ကျွမ်းကျင်သွားပါပြီ။
(၂၀)ဇော်ဇော်အောင်ကား သူ့လီးကြီးကို ဒေါ်သက်ထားရဲ့အဖုတ်ထဲမှာစိမ်ပြီး ဒေါ်သက်ထားအဖုတ်ထဲမှာ ထိုးမွေနေပါတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားရဲ့ ဖင်ကြီးကကုန်းထားတာက ရက်စက်လှပါတယ်...ဖွတ်ဖွတ်..ရှီးရှီး..အားအားဒေါ်သက်ထားရဲ့ ညဉ်းညူသံလေးတွေက အခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေပါတယ်...ဒါပေမဲ့ဇော်ဇော်အောင်က သုတ်ရေတွေထွက်မသွားအောင်သေချာထိန်းနေပါတယ်.အခန်းပြင်မှာရှိသော မိန်းမ(၃)ယောက်ကို လိုးပေးရဦးမှာမို့ပါ.။တစ်ပတ်တစ်ခါ
ဒေါ်သက်ထား၊ဒေါ်သီသီဆွေ၊ဒေါ်နီလာ၊ ဒေါ်မျိုးမျိုးတို့ တစ်ဦးဦး လစ်သည့်အိမ်မှာ သူမတို့ အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ(၄)ယောက်ကို လင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ သူကတစ်ယောက်တည်း ဒိုင်ခံလိုးပေးရတာပါ။ထိုရက်မတိုင်မှီတစ်ရက်မှာ သူ့အနေနဲ့ ပွဲရုံကိုမသွားပဲ အားရှိမည့်အစားအစာတွေစားပြီး ကောင်းကောင်း အိပ်ပြီးအနားယူထားရပါတယ်..သက်ထားရေမပြီးသေးဘူးလား...စောင့်ရတာကြာတယ်နော်..အခန်းပြင်မှ ဒေါ်သီသီဆွေ အသံကပျံ့လွင့်လာပါတယ်..။ဒါကြောင့် လီးကို အဆက်မပြတ် ဒေါ်သက်ထားစောက်ဖုတ်ထဲကိုစိုက်စိုက်ချပါတယ်..။ဖွတ်ဖွတ်...ပလွတ်ပလွတ်..ရှီးရှီး...ဘွတ်ဘွတ်..သက်ထားရဲ့စောက်ပတ်ထဲကို
ဇော်ဇော်အောင်လီးဝင်သံ/ထွက်သံကို အတိုင်းတားကြားနေရတဲ့ အမျိုးသမီး (၃)ဦးကတော့ အလိုးခံချင်လွန်းလို့ အဖုတ်ထဲကအရည်ကြည်တွေစီးကျနေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့..မောင်မောင်ဆောင့်ဆောင့်အအ..ဆိုတဲ့သက်ထားရဲ့
အားရဖွယ်မြည်တမ်းသံကိုကြားပြီး(၅)မိနစ်ခန့်အကြာမှာ သက်ထားက အခန်းထဲကထွက်လာတာကြောင့် သီသီဆွေလဲ အခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်..။ဇော်ဇော်အောင်လည်း သီသီဆွေဝင်လာတာကိုကြည့်ပြီး သူ့လီးကြီးက တဆတ်ဆတ်နဲ့မာတောင်နေပါပြီ.ဒေါ်သီသီဆွေကို လိုးရတာကို သူအကြိုက်ဆုံးပါ..ဒေါ်သီသီဆွေကလည်းစောက်ပတ်လေးကကျပ်ကျပ်လေး နေတာကိုး..ဒေါ်သီသီဆွေက ကုတင်ပေါ်မှာတက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူလည်းဒေါ်သီသီဆွေရဲ့
ရှေ့မှာ လီးတန်းလန်းနဲ့ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဒေါ်သီသီဆွေရဲ့အဖုတ်ထဲကို လီးထည့်လိုက်ကာ..ဒေါ်သီသီဆွေကို လှမ်းဖက်လိုက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့် မုဆိုးထိုင်လိုးပေးပါတယ်..။ဘွတ်ဘွတ်..ရှီးအား..ဒေါ်သီသီဆွေကား သူ့ဆောင့်ချက်တွေမြန်လာတိုင်းအငမ်းမရညဉ်းညူနေပါတယ်..။ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ လီးကိုလည်းသူမစောက်ပတ်ထဲက အကြောအမျဉ်တွေက ဆွဲယူနေတာကြောင့်ဒေါ်သီသီဆွေရဲ့ ညှစ်အားဒဏ်ကို ဇော်ဇော်အောင့်လီးကမခံနိုင်တော့တာကြောင့် စောက်ရည်နဲ့လရေတွေကို ပြိုင်တူပန်းထုတ်လိုက်ကြပါတယ်.။နောက်တော့
ဒေါ်နီလာနဲ့ ဒေါ်မျိုးမျိုးက၀င်လာပါတယ်..ဇော်ဇော်အောင်မျက်နှာပေါ်ကို ဒေါ်နီလာက ခွလို့ဘာဂျာမှုတ်ခိုင်းသလို.ဒေါ်မျိုးမျိုးကသူ့လီးကို အပေါ်ကခွဆောင့်ရင်း နောက်ဆုံးမှာ သုံးယောက်သားပြိုင်တူပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ ဒေါ်သက်ထားနဲ့ ဒေါ်သီသီဆွေပါ အခန်းထဲဝင်လာပြီးဇော်ဇော်အောင်ကဒေါ်သီသီစောက်ပတ်ကိုယက်ပေး၊ဒေါ်သက်ထားကဇော်ဇော်အောင်လီးကိုအပေါ်မှ
ခွကာ အဖုတ်ထဲထည့်ဆောင့်ပေးကာ ဇော်ဇော်အောင်လက်နှစ်ဖက်က ဒေါ်နီလာ၊ဒေါ်မျိုးမျိုးတို့ရဲ့စောက်ပတ်ကို ပွတ်ပေးကာ သူမတို့(၄)ယောက်လုံး ပြိုင်တူတစ်ချီစီပြီးအောင် ပြုစုပေးလိုက်ပါတယ်။မနက် (၁၀)နာရီလောက်က စတဲ့ (၄)ယောက်တစ်ယောက်လိုးပွဲဟာ နေ့လည်(၂)နာရီလောက်မှာပြီးဆုံးသွားပြီး
ဇော်ဇော်အောင်လည်း သူမတို့(၄)ယောက်နဲ့အတူ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားနဲ့ မောမောဖြင့် အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
(၂၁)ဇော်ဇော်အောင်တစ်ယောက် အမျိုးသမီး(၄)ယောက်ရဲ့လင်ငယ်အဖြစ်ကောင်းကောင်း အသုံးတော်ခံပြီးတဲ့ နောက်မှာ
ကားကိုမောင်းပြီး သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်.။တဏှာကြီးတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိ မိန်းမ(၄)ယောက်ကို လိုးပေးရတာ အရမ်းကောင်းပေမဲ့သူမတို့က(၄)ယောက် သူကတစ်ယောက်ထဲဒိုင်ခံလိုးရတာကြောင့် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးနုံးချိပြီးပင်ပန်းနေပါပြီ.ကားက လမ်းထိပ်အရောက်မှာ..သူ့ကားရှေ့မီးရောင်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အမူးသမားနှစ်ယောက်ကဆွဲလားယမ်းလားလုပ်နေပါတယ်...ဟင်..ဝေေ၀အောင်ပါလား.။ မဖြစ်ဖူးဆိုပြီး သူဝင်ပါမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာပါတယ်..ဝေေ၀ဘာဖြစ်နေတာလဲ..ကိုအောင် သမီးကို သူတို့နှစ်ယောက်လိုက်နှောက်ယှက်နေလို့..။အမူးသမားနှစ်ယောက်က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေပါ..။ကဲ..ငါ့ညီတို့ အကိုတောင်းပန်တယ်ကွာ..ကောင်မလေးကကျောင်းဆရာမလေးပါ..မင်းတို့လည်းမူးနေကြပြီထင်တယ်..ဘာ..ခင်ဗျားကြီးတော်တော်ရှုပ်တယ်ဗျာ...သူ့ရင်ဘတ်ကို ကောင်လေးတစ်ယောက်ကဆောင့်တွန်းလိုက်တာ ကြောင့် သူနောက်ကိုယိုင်သွားပါတယ်.ဟာ..ပြောမရတဲ့ကောင်တွေ..ကဲကွာ.ခွပ်..သူ့လက်သီးကကောင်လေးတစ်ယောက် ပါးချိတ်ကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်.။ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သွားပြီး..ဝေေ၀အောင်ရဲ့ ကယ်ကြပါဦးရှင်ဆိုတဲ့ အော်လိုက်သံကိုလည်းကြားရပါတယ်..သူထိုးကိုယ်ထိုးဆိုပေမဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာရယ်..အားလည်းနည်းနေတာကြောင့်.သူ့မျက်နှာလည်းဖူးရောင်နေပါပြီ..ထိုအချိန်မှာ..အကိုအောင်နောက်မှာ..ဆိုတဲ့ဝေေ၀အောင်ရဲ့အသံကိုကြားရပြီးသူ့ခေါင်းကို ဒုတ်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလှမ်းရိုက်လိုက်တာကို သူမရှောင်နိုင်တော့ပါဘူး..။ခွပ်ခနဲ့အသံနဲ့အတူ ခေါင်းမှသွေးတွေစီးကျလာပြီး မြေပေါ်ကို လှဲကျသွားပါတယ်..သူ့အမြင်အာရုံတွေ အမှောင်မကျခင်မှာတော့ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေပြေးလာတာရယ်..ဝေေ၀အောင်ကသူ့ကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပွေ့ထားပြီး ကိုအောင်.ကိုအောင်လို့ခေါ်နေတာကိုပါပဲ.
(၂၂)ဇော်ဇော်အောင် သတိရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မျက်နှာကျက်မှာ လည်နေတဲ့ပန်ကာကိုပါ။သူတဖြည်းဖြည်းချင်း သူဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့စဉ်းစားတော့ ဝေေ၀အောင်ကိုအမူးသမားနှစ်ယောက်နှောက်ယှက် ရင်းသူရိုက်ခံရတာကိုမှတ်မိလာပါတယ်.။သူဆေးရုံရောက်နေတာဖြစ်မည်..။ အပြင်အဆင်ကလည်းဆေးရုံ အပြင်အဆင်မျိုး။သူ့ဘေးနားမှာ လူတစ်ယောက်ရှိသလိုထင်တာကြောင့် ခေါင်းကို ဖြည်းညှင်းစွာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝေေ၀အောင်ဖြစ်နေသည်။ဝေေ၀အောင်ကား သူ့ခွေးခြေခုံတွင်ထိုင်ပြီးသူ့ကုတင်ပေါ်တွင် ခေါင်းတင်ကာ အိပ်ပျော်နေတာပါ။သူမမျက်နှာလေးကအိပ်ရေးပျက်ထားတဲ့ မျက်နှာမျိုးနဲ့နွမ်းလျနေတာပါ။ဝေေ၀အောင်အိပ်ပျော်နေတာကြောင့်ဝေေ၀အောင်မျက်နှာလေးကိုသေချာကြည့်ရှုခွင့်ရလိုက်ပါတယ်.။အပြစ်ကင်းပြီး ယခုလိုဘာမှမပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာတောင် အရမ်းကိုလှနေသည်။မျက်တောင်လေးက ပင်ကိုသဘာဝ မပြင်မဆင်အတိုင်းကော့နေပြီး.ပါးလေးကဖောင်းဖောင်းလေး။ဆံပင်တွေကလည်း ခါးလောက်ထိရှိသည်။စွင့်ကားသော တင်ပါးတွေကလည်း အရမ်းကိုကြည့်လို့ကောင်းနေသည်။သူ့ငယ်ရည်းစား သီရိနဲ့တော်တော်တူပေမဲ့ ဝေေ၀အောင်က သီရိထက်ပိုလှပြီး ပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းသည်။ပြီးတော့ သီရိလိုမဟုတ် ရိုးသားအေးဆေးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကို သူစိတ်ထဲကသိနေသည်။ဝေေ၀အောင်ကိုကြည့်ရင်း သူ့ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာသည်။ဒါပေမဲ့ ဒေါ်သက်ထားတို့ကို သူ့စိတ်ထဲကဖြစ်သလို ရမ္မက်မပါတာကို သူသိနေသည်။ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကို သူမဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီ။သီရိတုန်းကလိုခံစားချက်မျိုး။ဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာ မြတ်နိုးချစ်ခင်မိသည့် ခံစားချက်မျိုး။အို..ဝေေ၀အောင်ရယ်..မင်းဟာအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုပြုစားနိုင်သွားသလားကွယ်..ဇော်ဇော်အောင် စိတ်ထဲမှတီးတိုးရွက်ဆိုရင်း ဝေေ၀အောင်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲ ဝေေ၀အောင်ရဲ့ကိုယ်လေးကတစ်ချက်တွန့်သွားပြီး နိုးလာပါတယ်.။သူမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကိုဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ပြီးသူမ၀မ်းသာသွားပါတယ်..။ကိုကိုအောင်...သတိရလာပြီနော်.အင်းလို့..ကိုဇော်ဇော်အောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေပါတယ်။။ကိုကိုအောင်သတိလစ်နေတာ (၃)ရက်ရှိသွားပြီ..ဝေစိတ်ပူလိုက်တာ..အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်.။
အပိုင်း ၂ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Posted by